(No. 41, July 10, 2020)
၁။ ကန့်ကွက်မှုကြား လဲချားမြို့နယ် အတွင်း ကျောက်မီးသွေးတူးရန် ကုမ္ပဏီ ကြိုးစားနေ
၂။ ကဘူဒမ်းစစ်ရှောင်များ နေရပ်ပြန်လိုကြောင်း ပြောဆို
၃။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရခက်နေကြောင်း KNU ပြော
၄။ ဟားခါးမြို့မှာ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင် စိုက်ထူမယ့်ကိစ္စ ဝေဖန်ခံနေရ
၅။ ကရင်စာ သင်ရိုးသစ်မွမ်းမံသင်တန်း ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်
၆။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအချို့ကို KNP ထုတ်ပြန်
၇။ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းမြောက်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုးခုတွင် အဓိကထား ယှဉ်ပြိုင်မည်
၈။ “ဝ” အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် အဓိကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
၉။ SNLD ပါတီအနေဖြင့် မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေအားလုံးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ဒေသခံများ၏ ဆန္ဒသဘောထားဖြင့် ရွေးချယ်မည်
၁၀။ UNA အဖွဲ့ဝင်ချင်း ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒနယ်တူလျှင် အားသာချက်ရှိသည့်ပါတီ အနိုင်ရရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်
၁၁။ ရိက္ခာပြတ်နေသည့် ဒါးလက်သို့ ဆန်ပို့ပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ ခွင့်ပြုချက် ယူရမည်ဟုဆို
၁၂။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဟုဆိုကာ ဝေဘူလတောင်တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သတ္တုတူးဖော်ရေး ဆောင်ရွက်နေ
၁၃။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ် ဒေသခံ ၇ ဦး ထိမှန်
၁၄။ သတ္တမတန်း သင်ရိုးညွန်းတမ်းအသစ်မှာ ကယား(ကရင်နီ)မျိုးနွယ်စုအမည်တချို့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့် ရိုးရာ ဓလေ့ အကြောင်းမှားနေ
၁၅။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကယားပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်များ၌ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးရန် ကယန်းအမျိုးသားညီညွှတ်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ တောင်းဆို
၁၆။ ကရင်လူငယ်ထု တစ်ရပ်လုံးအတွက်အရေးပါမည့် ကရင်လူငယ်မဟာဗျူဟာမူကြမ်းတစ်ခု ထွက်ရှိမည်
၁၇။ MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ရပ်နားတော့မည့် သတင်းထွက်ပေါ်၊ အလုပ်သမား ၁၅၀ဝ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေဟုဆို
၁၈။ မိုးရွာတိုင်း တန့်ယန်း လွယ်လွမ့် ပရဟိတကျောင်းသားများ ရွှံထဲတွင် စာသင်နေရ
၁၉။ မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့တွင် အပြီးသပ်ရွေးချယ်မည်
၂၀။ ရခိုင်မှာ စစ်တပ်ဖမ်းထားသူ ၁၁ ဦး အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့အမှု ဖွင့်ခံရ
၂၁။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းပေးရေ စာချွန်တော်ထုတ်ပေးရန် နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထား
၂၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရေနံနဲ့ သဘာဝသယံဇာတ စီမံကိန်းတွေ ရပ်တန့်ဖို့ AOW တောင်းဆို
၂၃။ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် နေအိမ်ပေါ် သစ်ပင်လှဲကျ၍ အမျိုးသမီးငယ် ၁ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရ
၂၄။ နောင်ချိုတွင် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၄,ဝ၀ဝ ခန့် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိ
၂၅။ နယ်စပ်မှ ခိုးဝင် မွတ်စလင် ၂၃ ဦးကို ထောင် ၆ လချမှတ်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ် ဟဲဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်နိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတခု မှ ဆက် လက်ကြိုးစားနေကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၆ ရက်က လဲချားမြို့နယ် ဟဲဆိုင်ကျေးရွာအတွင်း ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ တခုက လူလွှတ်၍ ဟဲဆိုင်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံ သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။“ဟေဟိန်းကုမ္ပဏီက လူ ၅ ယောက် လောက် ကျောင်းကို ရောက်လာတယ်။ ကျောက်မီးသွေးတူးဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းတယ်။ ဆရာတော်တို့ အနေနဲ့ ကန့်ကွက် ထားပါတယ်။ ကန့်ကွက်ထားတာတွေပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့လာပြောသွားတယ် ” ဟု ဟဲဆိုင် ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို မိန့်ကြားသည်။ ဟဲဆိုင်ကျေးရွာ အတွင်း ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီဘက်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံများထံ မကြာခဏလာရောက် စည်းရုံးခဲ့သော်လည်း တစုံတဦးမှ လက်မခံသဖြင့် ဆရာတော်ထံ လာရောက်ခွင့်တောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်အတွက် အဆိုပါ ကုမ္မဏီ၏ လူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရရှိရန် သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ ကြိုး စားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ လ တွင်လည်း လဲချားမြို့နယ် နောင်ယာဆိုးင်ကျေးရွာအတွင်း ကျောက်မီး သွေး တူးဖော်ရန် ဝမ်ပန်ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင် ခူးဒေါန မှလည်း ဒေသခံများ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သေးကြောင်း ဒေသခံများ ပြော ပြချက်အရသိရသည်။ လဲချားမြို့နယ် ဟဲဆိုင်ကျေးရွာအတွင်း ကျောက်မီးသွေးတူးမည့် ကိစ္စကို လွန်ခဲ့သည့် ၄လ ခန့်က မြို့နယ် သံဃာများနှင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကန့်ကွက်ထားကြောင်း လဲချားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းကျော်ဇေယျ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“သံဃာတော်တွေ ပြည်သူတွေက သဘောတူညီမှုမပေးရင် ကျနော်တို့လည်း ပြည်သူတွေဘက်ကပဲ ရပ်တည်သွားမှာပါ”ဟု စိုင်းကျော်ဇယျ က သျှမ်းသံ တော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
ဟဲဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရန် အတွက် (၅၀ဝ၀) ဧက ဝန်ကျင်းခန့်လျားထားပြီး၊ တူးဖော်မှုရရှိရန် အတွက် သံဃာတော်များ၊ ဒေသခံများကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ က စည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိမှာ လဲချားမြို့နယ် နမ့်လင်းကျေးရွာတွင် လွိုင်ဂျယ်နဂါး ကုမ္ပဏီ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ ၁၀ နှစ် သက်တမ်း ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ခွင့်ရရှိထားသည်။ ထို နမ့်လင်းကျေးရွာ အနီး ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်မှုကြောင့် ဒေသခံများ၏ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေများခမ်းခြောက်ခြင်း၊ လယ်ယာမြေများ ထိခိုက်ခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရသည်။ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ်အတွင်း တူးဖော်နေသည့် ကျောက်မီးသွေး စီမံကိန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ တွင် ဒေသခံ (၇၀ဝ) ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ https://burmese.sh annews. org/archives/17410
မြစ်ကြီးနားမြို့ အေးမြသာယာရပ်ကွက်အနီး နန်းကွေ့အုပ်စု၊ ကဘူဒမ်းကျေးရွာရှိ စစ်ရှောင်များက ၎င်းတို့၏ မူလနေရပ်သို့ ပြန်ကာ ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်လိုကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါ ကဘူဒမ်းကျေးရွာရှိ စစ်ရှောင်ပြည်သူများမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဟူးကောင်း လီဒိုလမ်းမ တိန်းကောက်ကျေးရွာအနီးတွင် တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ထွက်ပြေးလာခဲ့သော ရဝမ်ကုန်းကျေးရွာသားများ ဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိ ကဘူဒမ်းကျေးရွာတွင်ခိုလှုံ နေသော မြေနေရာသည် လာမည့် ၂၀၂၁ တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် စာချုပ်မကုန်ခင် နေရပ်ပြန်လိုကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။
“ဒီမှာနေတဲ့ စစ်ရှောင်တွေက အိမ်ပြန်ချင်တာကြာလှပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီနေရာမှာ ဆက်နေဖို့က အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အဓိကတော့ အခုသူတို့နေထိုင်နေတဲ့ စခန်းမြေနေရာကို ၃ နှစ်သာ နေထိုင်ဖို့စာချုပ် ချုပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ အခုဆိုအချိန်က တစ်နှစ်ကျော်ကျော်သာကျန်တော့တယ်။ အဲ့လိုအနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ကရွာကိုပြန်ချင်နေပြီ။”ဟု ကဘူဒမ်းစစ်ရှောင်တာဝန်ခံ ဦးဆန်နိုင်ဖီ က ပြောဆိုသည်။ ၎င်းတို့က မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် နေရပ်ပြန်ချင်သော်လည်း လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်မှုရှိနေသည့်အပြင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ထိထိရောက် ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း သူကပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် လက်ရှိ Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွာသည့်ကာလတွင် စစ်ရှောင်စခန်းပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်း ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။“နေရပ်ပြန်တာကို အလွန်လိုလားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမှာနေရတာ နေရထိုင်ရ တာလည်း ကျဉ်းကြပ်တယ်။ ကိုယ်သွားချင်သလိုလည်းသွားလို့မရဘူး။ အများရဲ့လက်အောက်မှာ နေရတာဖြစ်တယ်။ နေရ တာလည်း လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။ ကိုယ့်ခြံကိုယ့်ဝန်းနဲ့နေချင်ပြီ။ ကိုယ့်နေရာမှာဆို ဘယ်လောက်ဘဲ ခက်ခဲခက်ခဲ နေနိုင်တယ်” ဟု စစ်ရှောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်မေရမ်က ပြောဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် စစ်ရှောင်များကို ကူညီထောက်ပံ့ ပေးရန်နှင့် နေရပ်ပြန်ရေးကို အမြန်အကောင်ထည်ဖော်ပေးရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ လက်ရှိ ကဘူဒမ်း စစ်ရှောင်စခန်းတွင် ရဝမ်မျိုးနွယ်စု အိမ်ထောင်စု ၁၄စု နှင့် လူဦးရေ ၄၁ ယောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၇ တိန်းကောက်ကျေးရွာအနီးတဝိုက်တွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA) တိုက်ပွဲများ ပြင်း ထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သာမက မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ ဒေသခံများကို KIA စစ်သားများအဖြစ် ထင်မြင်မှာယွင်းကာ ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲသဖြင့် ရဝမ်းကုန်းဒေသခံများက မြစ်ကြီးနားသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်ရှောင် များနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနှင့်ကချင်လူသားချင်စာနာထောက်ထားရေးအဖွဲ့ (KHCC)တို့ ပူးပေါင်းပြီး နေရပ် ပြန်ပို့ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များရှိနေသည့်အတွက် ၎င်းတို့လည်း ထိုနည်းတူ နေရပ်ပြန်လိုကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/07/07 /%e1%80%80%e1%80%98%e1%80%b0%e1%80%92%e1
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေကြား ယုံကြည်မှုတွေ တိုး တက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-U ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကောင်းစွာမလည်ပတ်နိုင်သေးတာကို ဖော်ပြနေတယ်လို့ ကော်မတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဗိုလ်ချုပ် စောအိုင်းဇက်ဖိုးက သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အပစ်ရပ်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့ တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး နွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ JMC-U ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဗိုလ်ချုပ် စောအိုင်းဇက်ဖိုး က လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲဖြစ်တာက ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတာကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။ “တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြား ယုံကြည်မှုများ တိုးတက် များပြားလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသော်လည်း ယင်းမျှော်လင့်ချက်များ လက်တွေ့ဖြစ်မလာသေးပါ။ ယင်းအစား NCA စာချုပ် ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များအကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမှာ အထူးစိုးရိမ်ရမည့် အခြေအနေ မဟုတ် သော်လည်း JMC ရဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများ ကောင်းစွာလည်ပတ်လာနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကို အထူးအလေးထား သတိချပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-U အစည်းအဝေး ဆိုရင် တစ်နှစ်နဲ့ ၁၀ လကျော်ကြာ ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ၁၉ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်မှာ ပြန်လည်ကျင်းရာမှာ ဗိုလ်ချုပ် စောအိုင်းဇက်ဖိုးက ထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။ JMC ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကပူးတွဲမှုဆိုတဲ့ပုံစံထက် ပူးပေါင်းမှုပုံစံဖြစ်နေတဲ့ အချက် အပြင် လက်တွေ့မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေ ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ အားနည်းချက်ရှိတာ ကြောင့် အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေ နဲ့ တပ်မတော်ကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ ဗိုလ်ချုပ် စောအိုင်းဇက်ဖိုး က ပြောပါတယ်။ အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့မှာ အင်အားကြီး နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU နဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA အဖွဲ့ တို့ဟာ တပ်မတော်နဲ့ နယ်မြေကျော်လွန် အငြင်းပွားမှုအပါအဝင် တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ် တာ တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုပြီး အဲဒီ နှစ်ဖွဲ့က JMC နဲ့ UPDJC အစည်း အဝေးတွေကို တစ်နှစ်ကျော် ကြာ မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးမောင်မောင်စိုး က JMC ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ တပ်နေရာ ချထားရေးကို အောင်မြင်အောင်ညှိနှိုင်းဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၃၀ နဲ့ ၃၁ ရက်နေ့မှာ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်မယ့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်ထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး JICM၊ သြဂုတ်လ ၁၀ နဲ့ ၁၁ ရက် နေ့မှာ UPDJC နဲ့ သြဂုတ်လ ၁၂၊ ၁၃ နဲ့ ၁၄ ရက်နေ့တွေမှာ စတုတ္ထအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ အစည်းအဝေးတွေ ဆက်တိုက်ကျင်းပသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/knu-says-hard-to-build-trust-07072020 053458.html
ချင်းပြည်နယ် မြို့တော် ဟားခါးမြို့မှာ ကျပ်သန်း ၆ဝ ကျော် အသုံးပြုပြီး လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ်နဲ့ ပန်းခြံ တည်ဆောက်မယ့်ကိစ္စကို ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနည်းဆုံးဒေသတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ်အတွက် ငွေကျပ်သန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံ ဆောက်ရွက်မယ့်အစား အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေနဲ့ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေမှာ အသုံးချသင့်လို့ ထောက်ပြမှုတွေရှိ နေတာပါ။ အဲဒီကုန်ကျမယ့် ငွေတွေကို ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့ရောက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အသုံးပြုသင့် တယ်လို့ တီးတိန်လူငယ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုမုန်နိုက ထောက်ပြပါတယ်။“အခုကကျွန်တော်တို့လည်း သိနေ တာပဲ။ ပလက်ဝမှာ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတာ တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှ စဉ်းစား ကြည့်စေချင်တယ်။ ဒီသန်း ၆၀ လုံး ကုန်ပြီးတော့မှ ဒီလွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင် စိုက်ထူတာထက် စစ်ဘေးဒုက္ခခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ဒီထက်များများပံ့ပိုးနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်တို့ ဘာတို့ စိုက်ရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်” တည်ဆောက်မယ့် လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ဟာ အမြင့်ပေ ၇၅ ပေရှိပြီး အချင်းကတော့ ၁၄ ပေ ရှိပါတယ်။
ကုန်ကျငွေ သန်း ၆၀ ဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ကာလ New Normal လို့ ခေါ်ကြတဲ့ လူနေမှုပုံစံသစ်မှာ လိုအပ်လာမယ့် အခြေအနေတွေအတွက် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ ဒေသခံတွေလည်း ရှိနေ ပါတယ်။“အခု ကျောက်တိုင်တွေ စိုက်တယ်။ ရုပ်တုတွေလုပ်တာက လာလည်တဲ့လူတွေ မြင်စေချင်လို့ ကျွန်တော် သဘော ပေါက်တယ်။ ကိုဗစ် ၁၉ ကလည်း ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဘယ်သူမှလည်းလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲတော့ ဘယ်သူ့မှ ကြည့်မယ့် သူမရှိတဲ့ ရုပ်တုတွေ၊ ကျောက်တိုင်တွေ ထားမယ့်အစားတော့ ချင်းပြည်နယ်မှာ New Normal Life အတွက် ဘာမှအဆင်သင့်မဖြစ်ဘူး။ ပြင်ဆင်ထားတာတွေလည်း မရှိဘူး။ သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပြီး လူအချင်း ချင်းတွေ့လို့မရတဲ့ Lockdown စပြီး ကြေညာပြီး ၅ နာရီအတွင်းမှာ သူတို့ အွန်လိုင်းရောက်သွားကြပြီ။ စီးပွားရေးတွေ အွန်လိုင်းမှာ လုပ်ကြ တယ်။ ပညာရေးတွေကို အွန်လိုင်းမှာ ဆက်ပြီးလေ့လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုဗစ်ဖြစ်တာ ရင်ဆိုင် လာတာ တော်တော် ကြာပြီပေါ့နော်။ တကယ်တမ်းဖြစ်တာက ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှာ ဆိုတော့ အခု ၆ လ ၇ လ အတွင်းကို ရောက်နေပြီ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲပေါ့နော်။ အဲဒါ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်”ဒေသခံ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုမိုက်ကယ် ဆွမ်းတ ပြောသွားတာပါ။ ဒေသခံတွေ ဝေဖန်ကန့်ကွက်ပေမယ့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ ဆက်လက်အကောင် အထည် ဖော်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာ အရင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နဲ့ ပန်းခြံရှိပေမယ့် လွှတ်တော်တည် ဆောက်ချိန်မှာ ဖယ်ရှားခဲ့ရတာ ဖြစ် တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုးထက်က ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့က လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း စတင်နိုင်ဖို့အတွက် ချင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် အုပ်မြစ်ချ အခမ်းအနား တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ် တည်ဆောက်တာကို ဒေသခံတွေက ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမယ့် ပြည်နယ်အစိုးရက အကောင်အထည်ဖောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကန့်ကွက်ရာမှာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကရင်နီလူငယ် ခြောက်ဦးဟာလည်း ထောင်ဒဏ် ၆ လ ပြစ်ဒဏ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/independence-
အသစ်ပြဌာန်းလိုက်သည့် ပိုး၊ စကောကရင်စာ သင်ရိုးညွန်းတမ်းအသစ်ကို ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ခလယ် -တံခွန်တိုင်တိုက်နယ် ဇီးဖြူရိပ်မြုံနေရာတွင် မြို့နယ်၏ သင်တန်းဌာန အမှတ် ၁ အနေဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သင်တန်း ဖွင့်လှစ် သွားခဲ့ကြောင်း သင်တန်းတာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ သင်တန်းကို ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်နေ့အထိ သင်ကြားပို့ ချသွားခဲ့ပြီး နည်းပြဆရာများနှင့်သင်တန်းသား ကရင်စာသင် ဆရာ/ဆရာမ ၃ဝဝ နီးပါး ပို့ချသင်ကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းနည်းပြဆရာ စောယောင့်သာအဲဆန်က “စာပေကို မြှင့်တင်တဲ့အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာပါ။ အစိုးရ အတန်း ကျောင်းမှာ အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးတွေ သင်ယူနားလည်ရလွယ်ပြီး လက်တွေ့နားလည်နိုင်အောင် သင်ရိုးအသစ် တစ်ခုကို သင်ကြားနည်းစနစ် ချပြတာပေါ့နော်။ ပိုး၊ စကောကရင်စာပါ ဒီသင်တန်းမှာ သင်ကြားပေးပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။ အရှေ့ပိုးကရင် (လိက်ထူ့လီ) စာ တက်ရောက်သင်ကြားသူ ၂ဝ၁ ဦးနှင့် စကောကရင်စာ သင်ကြားသူ ၃၇ ဦး တို့ကို ၎င်းတို့၏ ဆိုင်ရာစာပေ သင်ရိုးအသစ် သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို သင်တန်းဆရာများမှ သင်ကြားပေးပြီး ကရင်စာပေ စွမ်းရည်မြှင့်တင် သည့်အနေဖြင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများပါ သင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့တွင် ထည့်သွင်းကျင်းပသွားခဲ့သည်ဟု သိရ သည်။
“သင်ရိုးနည်း ပြောင်းသွားတယ်။ ကလေးတွေနားလည်အောင် ကဗျာတွေ၊ သီချင်းတွေ ရုပ်ပုံတွေနဲ့ပါ တွဲပြီးသင်ကြားတာ ပေါ့။ နေ့စားလပေး သင်နေတာဆိုတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ထောက်ပံ့မှု မရဘူးပေါ့နော်။ ကရင်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု မပျောက် အောင် ထိန်းသိမ်းစေချင်လို့ ဆရာမလုပ်ဖြစ်တာပါ။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပေါ် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု အရှေ့ပိုးကရင်စာသင် ဆရာမနောင်ဖော့အဲ့ကုံက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်အနေဖြင့် ကရင်စာသင်ရိုးညွန်းတမ်းအသစ် သင်တန်းဌာန ၁ ကို ၄ ရက်ကြာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးနောက် သင်တန်းဌာန ၂ ကို ဝင်းရော်မြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားရန် အစိုးရပညာရေးဌာနနှင့် မြို့နယ် ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သင်တန်းတာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020 /07/%e1%80%80%e1%80%9b%e1
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အချို့နှင့် ဝင်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်အချို့ကို ကရင်အမျိုးသားပါတီ-KNPက ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းတွင် စတင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အားပြုထားသည့် ကရင်အမျိုးသားပါတီသည် ဧရာဝတီတိုင်း ကရင်ရေးရာ မဲဆန္ဒ နယ်အတွက် ပါတီအတွင်းရေးမှူး-၁ မန်းမင်းရဲထွေး ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်အတွက် ပန်းတနော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်-၂ ၌ မန်းခင်မောင်အေး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်-၁ တွင် စောအာကာတိုး၊ ဝါးခယ်မမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် -၁ တွင် စစိုင်းခွန်သာတို့ အသီးသီးဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်သွားမည်ဟု KNP က တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ မဲဆန္ဒနယ်တွင်ဝင်ပြိုင်မည့် မန်းမင်းရဲထွေးက “ကျနော်တို့ ကရင်မဲဆန္ဒရှင်တွေက အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလို မဟုတ်တော့ဘူး။ နိုင်ငံရေး ရေချိန်မြင့်လာပြီး၊ အမျိုးသားရေးကို လည်း သိလာပြီးဆိုတော့ ဘယ်ပါတီကို မဲပေးရမယ်ဆိုတာလည်း ချင့်ချိန်တတ်လာပြီးပေါ့နော်။ ဘယ်သူ့ကို မဲပေးရမယ်ဆို တာပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ နောက်အစိုးရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါတီတွေကိုအနေနဲ့ သူတို့ဘာတွေကတိပေးခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နိုင်သ လဲ၊ ဘာတွေအဓိကထားဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာ မဲဆန္ဒရှင်တွေ သဘောပေါက်ပြီးလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ကရင်ပါတီများအနေဖြင့် အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့် အခြေအနေ မရှိသော်လည်း တိုင်းရင်းသားများစုပေါင်းကာ လွှတ်တော်ထဲတွင် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင် ကရင်မဲဆန္ဒရှင်များ ၏ သဘောထားတွင်လည်းမူတည်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ကရင်အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကြီး မြောင်းမြ၊ အိမ်မဲ၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဝင်ပြိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များကို ဆက်ထုတ် ပြန်သွားမည်ဟု ပါတီတာဝန်ရှိသူများက ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/07/%e 1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80 %b8%e1
၇။ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းမြောက်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုးခုတွင် အဓိကထား ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်
တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ကိုးခုတွင် အဓိကထား ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မိုင်းအုန်းခိုင်က ပြောကြားသည်။
တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ပလောင် တိုင်းရင်းသားအများအပြားရှိသော နမ့်ဆန်၊ မန်တုံ၊ နမ္မတူ၊ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ ကျောက်မဲ၊ မိုးကုတ်၊ မိုင်းကိုင် မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၈ နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုးနေရာနှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်နေရာ စုစုပေါင်း ၂၉ နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားရန် လျာထားသည်။ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ တန်းတူခွင့်၊ စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ပေါက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစသည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ထားကြောင်း တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မိုင်းအုန်းခိုင်က ပြောကြားသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ပဲ အဓိကဦးတည်တယ်။ နယ်မြေအေးချမ်း သာယာမှပဲ၊ တည်ငြိမ်မှပဲ ကျန်တဲ့ကဏ္ဍ တွေ လုပ်ဆောင်လို့ရမယ်။ ကျန်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးကဏ္ဍတွေကို ဒေသလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲ။ အားလုံးတော့ ၆၀၊ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အရင်နှုန်းထားထက် မလျော့အောင်တော့ ကြိုးစားရမှာပါပဲ။ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာလည်း ပါတီများအားလုံး မဲကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဆင့် (၅) ရထားတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာလည်း ပါတီကိုပဲ ထောက်ခံအားပေးကြဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားအောင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ဝိုင်းဝန်းကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးတွေပေါ့”ဟု မိုင်းအုန်းခိုင်က ပြောကြားသည်။
တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မေလတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ် ခြောက်နေရာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ နေရာ အနိုင်ရ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/181946
“ဝ”အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကို အဓိကအားပြု၍ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်း ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဆမ်းဆောင်ကားက ပြောကြားသည်။ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ဟိုပန်၊ မက်မန်း၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်းနှင့် ပန်ဆန်းစသည့် မြို့နယ် ခြောက်ခုကို ခရိုင်နှစ်ခုခွဲ၍ “ဝ” ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဟိုပန်နှင့် မက်မန်းမြို့နယ်များကို အစိုးရကထိန်းချုပ်၍ အခြားမြို့နယ်လေးခုကို “ဝ” ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA က ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ဟိုပန်နှင့် မက်မန်းမဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် “ဝ” အမျိုးသားပါတီ အနေဖြင့် အင်ပြည့်အားပြည့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်မြို့နယ်များဖြစ်သည့် တန့်ယန်း၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းပျဉ်း၊ မိုင်းယန်းတို့တွင် ဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။“ဝ” တိုင်းတော့ နှစ်မြို့နယ်ပဲရတော့ အပြည့်အဝတော့ ပြိုင်သွားမယ်။ ကျန်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တန့်ယန်း၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းပျဉ်း၊ မိုင်းယန်းတို့တော့ ပြိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားတာ အတည်မပြုသေးဘူးလေ” ဟု ဦးဆမ်းဆောင်ကားက ပြော ကြားသည်။“ဝ”အမျိုးသားပါတီကို ပြည်သူလူထု သဘောဆန္ဒအရ “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ “ဝ” အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် “ဝ”လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ သုံးပါတီပေါင်းစည်း၍ တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ပေါင်းတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ ၂၆ ရက်လောက်က ပထမအကြိမ် ပါတီညီလာခံလုပ်တာကို သက်ဆိုင်ရာပါတီဝင်အားလုံး မပေါင်းသေးဘူး။ ပေါင်းတော့မှအရေအတွက်အတိအကျသိရမယ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ၆၅၀ တင် ထားတာရှိပါတယ်။ ပေါင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းက လူထုဆန္ဒတောင်းဆိုမှုကြောင့် ပေါင်းတယ်။ လူထုမဲကိုတော့မျှော်လင့် တယ်။ လူထုတွေ အားပေးလိမ့်မယ်။ မဲပေးလိမ့်မယ် မျှော်လင့်တာပဲ။ “ဝ”လေးမြို့ထဲမှာ မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့အတွက် မဲထည့် လို့မရပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ “ဝ”အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ တာဝန်ပေါ့”ဟု ဦးဆမ်းဆောင်ကားက ပြောကြားသည်။
“အဓိကတော့ “ဝ” ပြည်နယ်ကို ပြည်ထောင်စုဝင် ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးဖို့ အဓိကဦးတည်ချက် ပေါ့။ ဒေသတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားဖို့ အခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ ရည်မှန်းချက်တွေပဲလေ။ “ဝ” ပြည်နယ်ကို ပြည်ထောင်စုဝင် ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ရန် အဓိကထားပါတယ်”ဟု ဦးဆမ်းဆောင်ကားက ပြောကြားသည်။“ဝ”အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင် UEC ထံ ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီတွင် နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ https://news-eleven.com/article/181940
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SNLD အနေဖြင့် မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေအားလုံး၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဒေသခံ များ၏ ဆန္ဒသဘောထားဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“အခု ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာက ပြည်နယ်လွှတ်တော် နှစ်နေရာနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တစ်နေရာရယ်၊ လိုအပ်ရင်လည်း ခရိုင်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ စုစုပေါင်း လေးနေရာ ဝင်ပြိုင်မှာပါ။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယခင် နိုင်ခဲ့ပြီးသား ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်နေရာနဲ့ အမှတ် (၁) မဲဆန္ဒနယ်တစ်နေရာ နိုင်ထားတာရှိ တယ်။ အဲဒီနေရာနှစ်ခုက လက်ရှိအနေအထားအရလည်း နိုင်မယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ ကျန်တဲ့ အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ်နဲ့ ခရိုင် မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာမှာလည်း အနိုင်ရရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာရှိတယ်”ဟု မူဆယ်မြို့နယ် ရှမ်းတိုင်းရင်း သားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းလှဖေက ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “ဒေခံတွေကို ပြောချင်တာက အမျိုးသားရေးအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပင်လုံရဲ့ ကတိကဝတ်တွေအရ ကျွန်တော် တို့ ပြည်နယ်မှာ ပြည်ထောင်စုမှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပုံစံမျိုး ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ဦးတည်ရည်မှန်းထား ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း အားလုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်‌အောင် အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်သွားပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒေသ နယ်မြေမှာရှိတဲ့ ဒေသပြည်သူတွေအားလုံးအတွက် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေးအပိုင်းကစပြီးတော့ အားလုံးကို အကာ အကွယ်ပေးနိုင်အောင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေအားလုံးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် SNLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်မှ စိစစ်အတည်ပြုပြီးပါက ဗဟိုသို့ ဆက်လက်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စိုင်းလှဖေက ဆိုသည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Shan Nationalities League for Democracy- SNLD) ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ https://news-eleven.com/article/181774
တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် UNA အဖွဲ့ဝင် ပါတီအချင်းချင်း ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒနယ်တူညီလျှင် အားသာချက်ရှိ သည့် ပါတီအနိုင်ရရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အဖွဲ့ဝင် ပါတီအချို့၏ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒနယ်တူ၍ ပါတီတစ်ခု ရှောင်ပေးခြင်းက ပါတီပုံရိပ်ထိခိုက်နိုင်သလို လူထုဆန္ဒကိုလည်း မလေးစားရာ ရောက်စေသည်ဟု UNA အဖွဲ့ဝင် ရှမ်းတိုင်း ရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းလိတ် က ပြောကြားသည်။“အဖွဲ့ဝင်ပါတီ အနိုင်ရဖို့တော့ အကုန်လုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာပေါ့”ဟု UNA ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးစိုင်းလိတ်က ပြောကြားသည်။
စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်(UNA) ကို နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၁၂ ပါတီမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြစ်ကာ ကျန်တစ်ပါတီမှာ ၁၉၉၀ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ကို အခြေခံတည်ထောင်သည့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ (UNDP) ဖြစ်သည်။
SNLD ပါတီအနေဖြင့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အများစုနှင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယား ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်အချို့တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အချို့တွင် UNA အဖွဲ့ဝင် ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ (KNC) နှင့် ကယန်းအမျိုးသား ပါတီ (KNP) တို့နှင့် မဲဆန္ဒနယ်ထပ်ခြင်းများ ရှိနိုင်သော်လည်း အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိ၍ ဆိုးရွားသည့်ပွတ်တိုက်မှု မရှိနိုင်ဟု ဦးစိုင်းလိတ်က ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် UNA အဖွဲ့ဝင်အချို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီချင်းညှိနှိုင်းမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု UNA အဖွဲ့ဝင် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော်က ပြောကြားသည်။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့်လည်း လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီ တိုင်းရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နေရာများ ကိုလည်း ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟုသိရသည်။ အခြားသော UNA အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်း သားနိုင်ငံရေးပါတီများလည်း ၎င်းတို့ပါတီ တည်ရှိ ရာဒေသများတွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/182054
တိုက်ပွဲများကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်နေကြသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ် ဒါးလက်အုပ်စုရှိ ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် ဆန်အိတ်များ သယ်ယူရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်ယူ၍ ပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ၂၈ ရက်က ဒါးလက်အုပ်စုရှိ ဒေသခံပြည်သူ ၄၀ဝ၀ ကျော်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ချင်းတက္ကသိုလ် ကျောင်း သား/သူများအဖွဲ့ (CUSR) မှ ဦးစီးပြီး ဆန် ၁၂၅ အိတ်ကို သယ်ဆောင်လာရာ ကဇူးကိုင်း တံတားအနီးတွင် ယာယီ တပ် စခန်းချနေကြသည့် တပ်မတော်က အိတ်၂၀ သာ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း CUSR မှ ပြောဆိုသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆန်အိတ်သယ်ယူရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ ထောက်ခံချက်ပါရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ခံ ချက်မပါသဖြင့် တပ်မတော်က ဆန်သယ်ယူခွင့် ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အမ်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကိုကိုမြတ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အဲဒီလို သယ်လို့တားတယ်ဆိုတာ တခါမှမကြားဖူးဘူး။ အမ်းမြို့နယ် လုံခြုံရေး အတွက်ဆို တပ်တွေ ရှိတယ်။ ကျနော့်ဆီ က ထောက်ခံချက်ပါရင် အကုန်လုံးက လွှတ်ပေးတယ်။ တခါမှ ပိတ်တယ် ပြုတယ် မကြားမိဘူး။ သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ ဆန်သယ်သွားတယ်ဆိုတာ ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲတော့ မသိဘူးလေ။ အဲဒီလူတွေက ဘာအတွက် သယ်တာလဲ။ ဘယ်သူက သယ်တာလဲ။ အဲဒါတွေလည်း လိုသေးတယ်။ သူတို့ပြောသလို ပိတ်တယ်ဆို တာက မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ”ဟု ပြောသည်။ ဆန်သယ်ယူရာတွင် ဒေသခံများနှင့် ပူးပေါင်းသယ်ယူမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ စာမတင်မိေ ကြာင်း CUSR မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဆလိုင်းထွန်းလှကျော်က ဆိုသည်။ ဆလိုင်းထွန်းလှကျော်က “ပို့မှာကတော့ အမ်းမြို့နယ်၊ CUSR ဆပ်ကော်မတီနဲ့ ဒေသခံတွေပေါင်းပြီး ဆန်ကို သယ်သွား ကြမလို့။ ဒါပေမယ့် ကဇူးကိုင်း အနီးမှာရှိတဲ့ တပ်နဲ့ ညှိကြည့်ကြ တော့ တပ်က လောလောဆယ် ဆန်ကိုအများကြီး သယ်ခွင့် မပေးနိုင်သေးဘူးလို့ ပြောတယ်။ သယ်မယ်ဆို တလကို ဆန်အိတ်၂၀ ပဲ သယ်ခွင့် ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ တကယ်လို့ လုံးဝ အဆင်မပြေကြဘူဆိုရင်လည်း ခင်ဗျားတို့ အဆင်ပြေတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းကြပါလို့ပဲ ပြောတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင် စစ်တပ်(AA)တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် ရေလမ်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ကုန်းလမ်းကို ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထပ်မံ ပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် အမ်းမြို့နယ်ရှိ ဒါးလက်အုပ်စုတခုလုံး စားနပ်ရိက္ခာများ ပြတ်လပ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒါးလက် အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၄၇ ရွာ ရှိသည့်အနက် ၇ ရွာက ရခိုင် လူမျိုးများ နေထိုင်သည့် ရွာများဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် ရွာပေါင်း ၄၀ မှာ ချင်းလူမျိုးများ နေထိုင်သည့် ရွာများဖြစ်ကာ လူဦးရေ စုစု ပေါင်း ၁ သောင်း ၃ ထောင်ကျော် ရှိသည်ဟု ဒါးလက် အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံက သိရသည်။ ဒါးလက်အုပ်စုက အုပ်ချုပ် ရေးမှူးတချို့လည်း နှစ်ဖက်တပ်ကိုကြောက်နေရသည့်အတွက် ထွက်ပြေးနေကြရသည်ဟု ဒါးလက်အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးထံက သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.co m/news/2020/07/07/225881.html
ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းခရိုင် ဆီးယင်းသစ်တောကြိုးဝိုင်းဧရိယာအတွင်း တည်ရှိသည့် ဝေဘူလတောင်တွင် ဖိုးလမင်းသာသာ ကုမ္ပဏီက ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဟုဆိုကာ သတ္တုတူးဖော်မှုဆောင်ရွက်နေသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိသည်။
ဝေဘူလတောင်သည် ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နယ်နိမိတ်အနီးတွင်တည်ရှိပြီး ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများက လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခြင်းများရှိလာသည့် အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဘက်မှ ကျေးရွာတစ်ချို့က ကန့်ကွက်မှုရှိလာသည့်အတွက် ယနေ့တွင် ကလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက သွားရောက်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု အထက်ချင်းတွင် လူငယ်များ ကွန်ယက် ဦးကျော်သက်ဝင်းကပြောသည်။“ဒေသခံတွေကန့်ကွက်တဲ့အခါကျမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဘက်ကသိတယ် ဒီဧရိယာက ဆီးယင်းကြိုးဝိုင်းထဲမှာပါနေတယ်၊ အဲဒီမှာ လုပ်ကွက်ပေါင်း (၁၄) ခုချထားတယ် အခုတော့ ပြည်နယ်အစိုးရ သ ဘောထားမှတ်ချက်နဲ့ ကျနော်တို့သိထားတာက လုပ်ကွက် (၄) ခုလောက်ကတော့ ပြည်နယ်အစိုးရ သဘောထား မှတ်ချက် ပေးပြီးပြီသိရတယ်၊ ဘာတွေမှတ်ချက်ပေးတာလဲတော့မသိရဘူး ဒါပေမဲ့ စစ်ကိုင်းဘက်က ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်မခံဘူး၊ ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရက သဘောထားမှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် သူတို့ဆောက်တာလို့ပြောတယ်၊ အဲဒါ ကျနော်တို့က ခွင့်ပြုချက်အမိန့်တွေပြပေါ့ တောင်းတာပေါ့ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရ ခွင့်ပြု တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပြဆိုတော့ သူတို့မပြနိုင်ဘူး၊ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ အခုဆောက် ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေဖျယ်ရှားပေးဖို့နဲ့ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့မှတ်ချက်ပြုတယ်”ဟု ဦးကျော်သက်ဝင်း က ပြောသည်။
ဖိုးလမင်းသာသာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အဆိုပါဝေဘူလတောင်တွင် ခရိုမိုက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါက တောင်ခြေရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဘက်ခြမ်းမှ လယ်ယာမြေအမြာက်အများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဟုဆိုကာ ကျေးရွာအုပ်စု (၃) အုပ်စု ငါးဖားအုပ် စု၊ နတ်ချောင်းအုပ်စုနှင့် ထောက်ကြံ့အုပ်စုတို့မှ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျနော်ပြောမယ် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရက ဘယ်သတ္တုလုပ်ငန်းမှ ခွင့်ပြုထားတာမရှိသေးဘူး၊ နောက်တစ်ခုက ချင်း ပြည်နယ်အစိုးရ သတ္တုလုပ်ကွက်စီစစ်ရေးက အသေးစားနဲ့ လက်လုပ်လက်စားပဲ ခွင့်ပြုချက်ပေးလို့ရတယ်၊ အကြီးစားကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပဲဆိုင်ပါတယ်၊ ချင်းပြည်နယ်က လုပ်ကွက်ချထားပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာ ဗဟိုကသတ်မှတ်ထားတာ ပြည်ထောင်စုကသတ်မှတ်ထားတာ၊ ဆိုတော့ နံပတ်တစ်က ကျနော်တို့ချထားတာမရှိပါဘူး နံပတ်နှစ်က ချင်းပြည်နယ်က ချထားပေးတယ်ဆိုရင် စာရွက်စာတမ်းတောင်းပါ ခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းတောင်းပါ၊ အဲဒါတော့ ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ ဆီရောက်လာရင် အစစ်လားအတုလား ခွဲပေးမယ်၊ တကယ်လို့ အတုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးသမားတွေက လုပ်ငန်းရှင် တွေက ဒါဥပဒေမဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါကိုလည်း ဥပဒေအရအရေးယူလို့ရတယ်”ဟု ချင်းပြည်နယ်သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးမာန်ဟင်းဒါလ်ကပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင် ခရိုမိုက်သတ္တုသည် ဖလမ်းခိုင် တီးတိန်၊ တွန်းဇံမြို့နယ် မြွတောင် ဖားတောင်တွင် အများဆုံးထွက်ရှိပြီး ဒုတိယမှာ ဖလမ်းမြို့နယ် ဆီးယင်းသစ်တော်ကြိုးဝိုင်းဒေသ ဝေဘူလတောင်ဟု သိရ သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74136
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပန်ကိုင်ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်ခွမ်ရွာတွင် ပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပြီး ဒေသခံ ၇ ဦး ထိမှန်ခဲ့ ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၈ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်က နမ့်ခွမ်ရွာရှိ တောင်ယာတွင် အမျိုးသား ၂ ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၅ ဦး အလုပ်လုပ်နေစဉ် ပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပွားကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း မေတ္တာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်း နာယက က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။“မြေမြှုပ်မိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တောင်ယာလုပ်ရင်း နားနေချိန်မှာ မပေါက်ကွဲသေး တဲ့ မိုင်းကို သွားထိမိလို့ ပေါက်ကွဲတာ။ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်တဲ့ ၅ ဦးကိုတော့ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကို ပို့ထားတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သည့် အမျိုးသား ၁ ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၄ ဦးကို ယမန်နေ့တွင် ဂရုဏာလူမှု ကူညီရေးအသင်း နှင့် မေတ္တာရှင် လူမှုကူညီရေးအသင်းတို့က လားရှိုးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုဒေသတလျှောက်တွင် အစိုးရ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ လှုပ်ရှားနေသဖြင့် မပေါက်ကွဲသေးသည့် ကျည်များ ဆက်ရှိနိုင်ဦးမည်ဖြစ် ကြောင်း သွားရောက်ကူညီခဲ့သည့် မေတ္တာရှင် လူမှုကူညီရေး အသင်း က ပြောဆိုလိုက်သည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်မတော် နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA)၊ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)တို့ မကြာခဏ ထိတွေ့သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ယခုရက်ပိုင်း အစိုးရတပ်မတော်သည် စစ်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုများ ပြုလုပ်ကာ ဒေသခံများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shan news.org/archives/17427
၁၄။ သတ္တမတန်း သင်ရိုးညွန်းတမ်းအသစ်မှာ ကယား(ကရင်နီ)မျိုးနွယ်စုအမည်တချို့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့် ရိုးရာဓလေ့ အကြောင်းမှားနေ
သတ္တမတန်း သင်ရိုးညွန်းတမ်းအသစ်မှာ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားအမည်နာမနဲ့ ရိုးရာဓလေ့အကြောင်း တွေ မှားနေတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေက ထောက်ပြ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ကယား(ကရင်နီ)လူမျိုးတွေရဲ့ အထွတ်အထိပ်ထားတဲ့ အဲဒိုပေါ်မီပွဲ (ခေါ်) ဒီးကူပွဲကို ဒီကူးပွဲလို့သာ ဖော်ပြထားခြင်း၊ ဒီးကူကို ဒီကူးဟု စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းစွာ ရေးသားထားခြင်းနှင့် ၎င်းပွဲတော်ကိုလည်း ကောက်သစ်စားပွဲလို့ ဆရာကိုင်စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားခြင်းက လွှဲမှားနေတယ်လို့ ကယားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဌ ခူးဖဲညွန့်ရယ်က ပြောပါတယ်။ ယခင် ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကယားတစ်မျိုးသားလုံးညီလာခံမှာလည်း ဒီးကူပွဲအစား အဲဒိုပေါ်မီပွဲလို့သာ အသုံးပြုကြဖို့ အတည်ပြု ချက်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။“ဒါပေမယ့် အလွယ်တကူသုံးနှုန်းချင်နေတဲ့ဒီ တခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေက ဒီးကူဆိုတဲ့ဟာကို သုံးနှုန်းနေကြတယ်။ အခု ဒီအဲဒိုပေါ်မီရဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပြန်ပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ တုန်းက ထေးငှားလျား တစ်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ အဲဒိုပေါ်မီလို့ ကျနော်တို့ ပြန်လည်ပြီးတော့ အတည်ပြုချမှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြည်သူလူထုတွေကြားမှာဆိုရင် အဲဒိုပေါ်မီလို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေပါတယ်။”ကျောင်း သားကိုင်စာအုပ် စာမျက်နှာ ၃၁-၃၂ ထဲတွင်လည်း အဲဒိုပေါ်မီပွဲတော်သည် ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားများ၏ သဘောထားနှင့်မကိုက်ညီပဲ ခေတ်အဆက်ဆက်ကအမှားတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကလေးတွေကိုသင်ကြားမည်ဆိုပါကတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားမှာ သွေးခွဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ ကိုကျော်ထင်အောင် က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကယန်းဆိုတဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ယန်းကို (ယမ်း)လို့ သုံးထားခြင်း၊ ဂေဘားဆိုတဲ့ စာလုံး ပေါင်းသတ်ပုံလည်း ဘားကို (ပါး)အဖြစ်သုံးထားခြင်း အပြင် ကယားမျိုးနွယ်စု ၉ မျိုးထဲက ဇယိမ်း၊ ဂေခို၊ ကယန်း(ပဒေါင်း)၊ ယင်းဘော် ဆိုတဲ့ မျိုးနွယ်စု လေးစုက ကယန်းမျိုးနွယ်စု တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တဲ့အတွက် လေးခုလုံးဖော်ပြခြင်းက မှားနေ တယ်လို LAIN နည်းပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌ ကိုကျော်ထင်အောင် ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ ကယန်းမျိုးနွယ်စု လေးမျိုးရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိုလည်းမှာလည်း ဇယိမ်း=ကယန်း(လထ)၊ ကယန်း(ပဒေါင်)=ကယန်း(လဝီ)၊ ဂေခို=ကယန်း(ဂေခို)၊ ယင်းဘော်=ကယန်း(ကငန်) စသည်ဖြင့် ပြောင်လဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြကြောင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်သာ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး အားလုံးကို ကယန်းမျိုးနွယ်စုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ယခုလို ကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲမှာ မှားယွင်းဖော်ပြထားခြင်းမှာ အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုင်းရင်းသားရေးရာဌာန များနှင့် တိုင်းရင်းသားစာပေရုံးများသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကယန်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ယဉ်ကျေးမှုတာဝန်ခံ ဒေါ်ရင်မေ က ထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်။ ကယား(ကရင်နီ) ပြည်နယ်ရှိ ဆရာ/မ များ နှင့် ကျောင်းသား/သူများသည် တိုင်းရင်းသားဒေသခံဖြစ်၍ သင်ကြားရာတွင် အမှန်ကိုသင်ကြားပေး နိုင်သော်လည်း တစ်ခြား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များမှာ စာလုံးပေါင်းအမှန်ကိုမသိသောကြောင့် အမှားအတိုင်းသင်ကြားသွားနိုင်ပြီး နောင်လာနောင်သား များအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ကေကောကျေးရွာ အလယ်တန်းပြ ဆရာမ ဒေါ်ယွာအယ်ဖောက ဆိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ အသုံးအနှုန်းအခေါ်အဝေါ်များကို အတွင်းကျလေ့လာသင့်ပြီး ယခုလို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အကြောင်း များကို မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းမှာ ကယားပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်တည်းမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ အကြောင်းအရာတစ်ချို့လည်း မှားယွင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ https://www.bnionline. net/mm/ news-74113
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ် များတွင် ကယားပြည်နယ်၌ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်သာပါဝင်ပြီး ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ် (ကယန်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး) အား ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးရန် ကယန်းအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးဦးဆောင် ကော်မတီ က ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် သဘောထားထုတ်ပြန် တောင်းဆိုသည်။
ကယန်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကော်မတီတွင် ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ၊ ကယန်း အမျိုးသားပါတီ၊ ကယန်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေး မှုကော်မတီ၊ ကယန်းအမျိုးသမီး အစည်းအရုံး၊ ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။ ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၄ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောစိန်ထွန်းမှ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းခဲ့သဖြင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး သုတေသနဌာန ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာနကြီးမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင် ပြန်လည် ပေးပို့သည့်စာအရ ကယားပြည်နယ်တွင် ကယန်းလူဦးရေ ၆၉၉၁၀ ဦး ရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်ဟု ကယန်းအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကယန်းလူမျိုးများ သည် ကယားပြည်နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ဝ ဒသမ ၁ ရာနှုန်းကျော်ရှိသည့်အတွက် ကယန်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးတစ်ဦး ရရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်သော ကယားပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်တွင် ကယန်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခြင်းမရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ပါရှိသည်။
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ၌ တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ထိုတိုင်းဒေသကြီးရရှိပြီးသော သို့မဟုတ် ထို တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုရရှိပြီးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများမှအပ ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုး များအနက် လျော်ကန်သင့်မြတ်သော လူဦးရေဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ရှိလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက် ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးက လူမျိုးတစ်မျိုးလျှင် တစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက် တင်မြှောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ခွဲ (ဂ) ၌ ပြည်နယ်များတွင် ထိုပြည်နယ်ရရှိပြီးသော သို့မဟုတ် ထိုပြည်နယ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုရရှိပြီးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများမှ အပ ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအနက် လျော်ကန်သင့်မြတ်သော လူဦးရေဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ရှိ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၏ ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အသီးသီးက လူမျိုးတစ်မျိုး လျှင် တစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ကယား ပြည်နယ်တွင် ကယန်းတိုင်းရင်းသားများမှာ ပထမအများဆုံးဖြစ်သည့် ကယားမျိုးနွယ်စုပြီးနောက် ဒုတိယအများဆုံး နေထိုင် ကြသော မျိုးနွယ်စုများဖြစ်ပြီး ခေတ်အဆက်အဆက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ရှေ့တန်းမှပါဝင်ခဲ့ကြသော သမိုင်းကြောင်း များ ရှိသည်ဟု သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/181317
ကရင်လူငယ်များအနေဖြင့် မတူညီသောနယ်ပယ်ဒေသအသီးသီး၊ ကဏ္ဍအသီးသီးများမှတဆင့် တူညီသော ဘုံရည်မှန်းချက် များဖြင့် ကရင်အမျိုးသားရေးပန်းတိုင်နှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲနေ သည့် ကရင်လူငယ်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှ မူကြမ်း တစ်ခုထွက်ရှိ လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင် လူငယ်ထုတစ်ရပ်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မဟာဗျူဟာမူကြမ်းရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၊ နယ်စပ်ရှိ ကရင်လူငယ်အဖွဲ့အစည်းအသီသီးမှ ကရင်လူငယ်များပါဝင်သည့် မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီဖွဲ့ စည်းကာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် မူကြမ်းရေးဆွဲ ရေး ကော်မတီမှ ယခု ဇူလိုင် ၃ ရက် မှ ၉ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တွင် မူကြမ်းရေးဆွဲရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အစည်းအဝေး တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါမူကြမ်းတစ်ခု ထွက်ရှိလာမည်လည်းဖြစ်သည်။ ကရင်လူငယ်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရေး ဦးဆောင်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ စောထွန်းထွန်း က “ ဒီဟာက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ စက်တင် ဘာလ မဲဆောက်မှာ ကရင်လူငယ်တွေ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပေါ့။ ဒါကိုမဟာ ဗျူဟာရေး ဆွဲရေးမူ ကြမ်းအဖွဲ့ကနေရေးဆွဲနေတာ၊ အခု Zero Draft စပြီးဆွဲတဲ့အချိန်ပေါ့။ အခု ဒီ ၅ ရက် ၆ ရက်ပြီးသွားရင်တော့ ကရင် လူငယ်မဟာဗျူဟာ Zero Draft ထွက်လာမယ်။ Final Draft ကတော့ဒီ လထဲထပ်ထွက်လာဖို့ ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကရင်လူငယ်မဟာဗျူဟာမူကြမ်းတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ အခွင့်အရေး၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဘာသာ စကားစသည့် ကဏ္ဍပေါင်း ၁၈ ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီထဲတွင်ပါဝင်သူများမှ ၎င်းတို့တာဝန်ယူထား သည့် ကဏ္ဍအသီးသီးများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်းကာ ရေးဆွဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။ မကြာမီထွက်ရှိလာမည့် အဆိုပါမူကြမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ အသီး သီးများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အကြံ ပေးကော် မတီများထံပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး ထို့မှတဆင့်ရရှိလာသည့်အချောသတ်မူကြမ်းများကို ကရင်လူငယ်နှီး နှောဖလှယ်ပွဲ၊ KYO ကွန် ဂရက်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် KNU ကွန်ဂရက်များထံတင်ပြပြီးမှ အဆင့်ဆင့် အတည်ပြု ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ကရင်လူငယ်များအနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သွားကြမည်ဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/07/%e1%80%80%e1%80%9b %e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
၁၇။ MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ရပ်နားတော့မည့် သတင်းထွက်ပေါ်၊ အလုပ်သမား ၁၅၀ဝ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေ ဟုဆို
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ပျားတောင်ကိုအခြေပြု၍ လည်ပတ်လျှက်ရှိသော Mawlamyine Cement Limited MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံသည် လာမည့် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရပ်နားသွားတော့မည့် သတင်းထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၁၅၀ဝ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ကြုံတွေ့ရမည့်အရေးကို စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
MCL စက်ရုံသည် ထိုင်းနိုင်ငံ SCG-Siam Cement Group-SCG နှင့် မြန်မာဘက်က Pacific Link Cement Industries-PLCI တို့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ရှယ်ယာကိစ္စပြဿနာရှိသောကြောင့် စက်ရုံရပ်ဆိုင်းတော့မည့်အခြေအနေကို စက်ရုံ ဝန်ထမ်းအချို့ထံမှ ကြားသိရပါသော်လည်း စက်ရုံတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား အတည်မပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ MCL တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကိုစိုးဝင်း က “တကယ်လို့ စက်ရုံရပ်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်အလုပ်ရှာဖို့လဲမလွယ်ဘူး။ အခုကာလ ကလဲ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်စက်ရုံမှလဲ အလုပ်သမားအသစ်မခန့်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့မှာတော့ အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လဲ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုအတွက် ဘယ်လိုမှထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားတော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့” ဟု မွန်သတင်းအေဂျင်စီကို ပြောသည်။
စက်ရုံရပ်နားသည့်အခါ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမည့် အလုပ်သမား ၁၅၀ဝ ကျော်အတွက် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် လာရောက် ဖြေရှင်းပေးစေလိုကြောင်း MCL တွင်အလုပ်လုပ်နေသော ကိုစိုးကြည်က ပြောသည်။“စက်ရုံကြီးကရပ်မယ်လို့တော့ ပြော ထားတာပဲ။ အတိအကျတော့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုယ်တို့ကတော့ ရပ်သွားတဲ့ အတိုင်းတာတစ်ခုဆိုရင်တော့ အလုပ် သမားသက်တမ်းအနေနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တော့ ရချင်တာပေါ့” ဟု ကိုစိုးကြည်က ဆက်ပြောသည်။
Mawlamyine Cement Limited- MCL (ကျိုက်မရောဘိလပ်မြေစက်ရုံ) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကျောက် မိုင်းခွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကျောက်မိုင်းခွဲခြင်းကိစ္စအဝဝသည် MCL (ကျိုက်မရောဘိလပ်မြေ စက် ရုံ)နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း စက်ရုံ၏ Managing Director, Mr Hatsachai Prahanphap က ဇွန်လ ၈ ရက် နေ့စွဲ ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ “အခုဇူလိုင်လလယ်မှာ လက်ကျန်ကုန်ကြမ်း(ကျောက်) တွေ ကုန်သ လောက်ဖြစ်သွားပါပြီ၊ ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းက ရပ်နားပေမယ့် ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ လုပ်စရာနည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတယ် သြဂုတ်လ ကုန်ရင်တော့ စက်ရုံလုံးဝပိတ်သိမ်းတော့မယ့်အနေအထားပါ”ဟု အမည်ဖော်ပြခွင့်မရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား စက်ရုံဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။
တစ်နေ့လျှင် ဘိလပ်မြေတန်ချိန် ၅၀ဝ၀ ထုတ်လုပ်သည့် MCL ဘိလပ်မြေစက်ရုံသည် ထိုင်း SCG က အစုရှယ်ယာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မြန်မာ PLCL က အစုရှယ်ယာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀ဝ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထား သည့် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး စက်ရုံစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်မှာ ၃ နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်သည်။ http://burm ese.monnews.org/2020/07/08/mcl-%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%9c%e1%80%
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ လွယ်လွမ့် ပရဟိတကျောင်းတွင် စာသင်ကြားနေသည့် ကလေးငယ်များ သည် မိုးရာသီရောက်တိုင်း အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရသည်။
ထိုနေရာသည် တန့်ယန်းမြို့နယ် လုံပုံကျေးရွာအုပ်စု နောင်လုံးကျေးရွာ တွင်တည်ရှိပြီး ကျောင်းသား ၁၀ဝ ကျော် ပညာ ဆည်းပူးနေကြောင်း ထိုကျောင်းတွင် စာသင်ပေးနေသည့် ဆရာမ နန်းမိုဆိုင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ မိုးရွာ ရင် သက်ကယ်နဲ့လုပ်ထားတော့ မိုးရေတွေယိုတယ်။ စာသင်ခန်းထဲရေလျှံတယ်။ မြေကြီးဆိုတော့ ရွှံကြားထဲမှာ စားသင်နေရ တာပေါ့”ဟု နန်းမိုဆိုင် ကဆိုသည်။ ထိုကျောင်းသည် ပညာရေး သင်ယူရန် အခွင့်အလမ်းကင်းမဲ့သည့် တန့်ယန်းမြို့နယ်ထဲ မှ ကျေး ရွာများမှ ကလေးငယ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာထဲတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ပေါများသဖြင့် ကလေးငယ်များ အကျင့်မ ပျက်အောင် လွယ်လွမ့် ပရဟိတကျောင်းကို ထူထောင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု နန်းမိုဆိုင် ပြောပြသည်။“ရွာ ၁၃ ရွာက ကလေး တွေပါ။ အဲ့ကလေးတွေ နေတဲ့ရွာတွေမှာ စာသင်ကျောင်းမရှိဘူး။ နောက် ရွာတွေမှာ မူးယစ်ဆေးတွေ ပေါလွန်းလို့ ကလေး တွေ အကျင့်မပျက်အောင် ကျောင်းမှာ ခေါ်ထားရတာပါ” ဟု နန်းမိုဆိုင် က ထပ်လောင်းပြောသည်။
လွယ်လွမ့် ပရဟိတ ကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ သတ္တမတန်းထိ ရှိပြီး၊ အသက် ၆ နှစ် အရွယ်မှ အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်ထိ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားအဖြစ် လာရောက်နေထိုင် ပညာသင်ကြကြောင်း သိရသည်။ ကလေးငယ်များအတွက် အဆင်ပြေ သည့် စာသင်ကျောင်းဆောင် တဆောင် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ဆရာမ က ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ ထိုပရဟိတကျောင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ အလှူရှင်များဖြင့် ရပ်တည်နေရသည့် ကျောင်းတကျောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။ https://burmese.shannews.org/arc hives/17396
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ MUP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အပြီးသပ်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၂) နိုင်စံတင်က ပြောသည်။“မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားရွေးချယ်မယ်၊ ဗဟိုက နေနောက်ဆုံးအတည်ပြုပေး မှာကတော့ ဇူလိုင် ၃၀ အစား ၂၀ ရက်နေ့ကို ရက်ရွှေ့လိုက်ရတယ်၊ ဒါမှလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ကော်မရှင်ကို စာရင်းတင်လို့မှီအောင်ပေါ့နော်” ဟု နိုင်စံတင်က ဆိုသည်။
မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီ နိုင်တလညီက “ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းအတည်ပြုပြီးရင် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ စလုပ်တော့မယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်း ၁၈ ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေအနေနဲ့ အဲဒီအချက်တွေပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝင်ပြိုင်မယ့်မဲဆန္ဒနယ်မှာ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်”ဟု ၎င်းကဆို သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း ထွက်ရှိလာမှသာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နယ်မြေစည်းရုံးရေးနှင့် ပါတီစည်းရုံး ရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးတွင် စတင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ နိုင်တလညီ က “ကျနော်တို့ပါတီက မွန်လူမျိုးအရေး တစ်ခုတည်းကို လုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး ကို လွှမ်းခြုံပြီး ဦးဆောင်သွားမှာပါ၊ ဗမာလူမျိုးဖြစ်စေ ကရင်လူမျိုးဖြစ်စေ ပအိုဝ်းလူမျိုးဖြစ်စေ တခြားဘာသာခြားဖြစ်စေ ကျနော်တို့နဲ့အတူ တစ်သားထဲ လုံးဝခွဲခြားမထားပါဘူး၊ တစ်ချို့လူတွေ မြင်နေတာက သူတို့ မွန်လူမျိုးတစ်ခုအတွက်ပဲလုပ် ဆောင်သွားဖို့ ပါတီဖွဲ့ထားတာလားဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်မျိုးတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်၊ နာမည်ကသာ တိုင်းရင်းသားပါတီပါ၊ လုပ် ဆောင်ခွင့်ရလာတဲ့ အခါကျရင် ပြည်နယ် အကျိုး ပြည်ထောင်စု အကျိုးတစ်ခုလုံးအတွက်ပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီအနေဖြင့် မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါတီ ကော်မတီ ဝင်များက ရွေးချယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်စေမှာဖြစ်ပြီး မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ဗဟိုမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပါတီခေါင်းဆောင် များက အသိပေးပြောကြားထားသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/07/06/%e1%80%99%e1%80%bd% e1%80%94%e1%80%ba%e1%
ကျောက်တော်မြို့နယ် ကစ္စပနဒီတံတားရှိ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃ ရက်နေ့အထိ သွားလာသူတွေကို စစ်ဆေးရာမှာ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီး မသင်္ကာမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူ ၃ ဦးကို ကျောက်တော်မြို့နယ် ရဲစခန်းကို လွှဲပြောင်းပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ကျောက်တော် မြို့ခံ ကိုကျော်လှမြင့်ကပြောပါတယ်။“ကစ္စပနဒီတံတားမှာ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီဝန်းကျင်ထဲမှာ ပိန္နဲချောင်းကျေးရွာသား ၂ ဦးနဲ့ အဲဒီဘုရားပေါင်းကျေးရွာက တဦး သူတို့ ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီးတော့ ကျောက်တော်မြို့မရဲစခန်းမှာ အကြမ်းဖက်မှု ပုဒ်မ ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က)နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ဗျ။”အမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေကတော့ ကျောက်တော်မြို့နယ် ဘုရားပေါင်းကျေး ရွာနေ မောင်မောင်ဌေး ပိန္နဲချောင်းကျေးရွာနေ ကိုရဲထွန်းနဲ့ ကိုနေမျိုးထွန်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာမှာတော့ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနေ မောင်မောင်ဌေးဟာ AA အဖွဲ့က တပ်သား အဆင့် ရှိသူဖြစ်ပြီး ကိုရဲထွန်းနဲ့ ကိုနေမျိုးထွန်းတို့ဟာ AA သတင်းပေးတွေဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရမိလို့ ဇူလိုင် ၄ ရက်မှာ ၎င်းတို့ ၃ ဦးကို ကျောက်တော်မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ အရေးယူဖို့ စီစဉ်ထားတယ် လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ ပိန္နဲချောင်း ကျေးရွာ နေ ကိုရဲထွန်းရဲ့ မိသားစုဝင် တဦးကတော့ ကိုရဲထွန်းနဲ့ ကိုနေမျိုးထွန်းတို့ဟာ AA အဖွဲ့နဲ့ ပက်သက်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အလားတူ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကပ်သပြေကျေးရွာသား ၇ ဦးနဲ့ စိုင်ခြုံကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးတဦးကိုလည်း အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း တပ်မတော်ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကပ်သပြေကျေးရွာသား ၇ ဦးနဲ့စိုင်ခြုံဒွိန်ကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူး ဦးလှမြင့် ကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀(က) (ဈ) ၊ ၅၂(ည)တို့နဲ့ ဓညဝတီရေတပ်စခန်းက တရားလိုလုပ် အမှုဖွင့် ထားကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ကျောက်ဖြူခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ AA နဲ့ ဆက်စပ်တယ်လို့ ယူဆရသူ ၁၁ ဦးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့တို့အကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုအတွင်း သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ များပြားလာနေတာပါ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး REC ကတော့ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၀၀ လောက် ရှိနေတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လမှာပဲ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/5494333.html
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းပေးရေး စာချွန်တော် ထုတ်ပေးရန် နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော် တွင် ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့ ပြန်လည်လျှောက်ထားသည်ဟု ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူထံမှ သိရသည်။ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းပေးရေးအတွက် Phoe Phyu associate Law Firm အဖွဲ့က တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်နေမှုသည် ယခု တတိယအကြိမ်ဖြစ် သည်ဟု သိရသည်။
“အမှုလက်ခံပေးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပဏာမ လျှောက်လဲချက်ကို လျှောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းဥပဒေတွေ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနှင့် မညီညွတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ ဒီစီမံကိန်းကြီးကို တားမြစ်စေ စာချွန်တော် ချမှတ်ပေးဖို့အတွက် ကနဦးအနေနဲ့ ဒီအမှုကို လက်ခံပေးပါ။ ဒါမှ တစ်ဖက်ကိုလည်းဘဲ ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်း စဉ် တွေကို ဆောင်ခင်းပေးပါ လို့ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူ က ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့ အွန်လိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းမှုတွင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ထာဝရ တား ဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့အတွက် ရှေ့နေဦးဖိုးဖြူက ပထမ အကြိမ်အဖြစ် Asia World Company ကို ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလတွင် မြစ်ကြီးနားခရိုင်တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သော်လည်း ပယ်ချခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ ထို့နောက် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တွင် ထပ်မံလျှောက်ခဲ့သော်လည်း ထပ်မံပယ်ချခံရသည်ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူက ပြောပါသည်။ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြင့်သဘောတူ ညီခဲ့သောစာချူပ်ကို ပြည်သူလူထုထံ ချပြရန် မိတ္တူကူးခွင့်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်တွင် ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့ သော်လည်း မအောင်မြင်ကြောင်း ထပ်မံပြောဆိုသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် တန်ဖရဲကျေးရွာမှ အောင်မြင်သာကျေးရွာသစ်တွင်ရွေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသော မြစ်ဆုံဒေသခံ ဒေါ်လုရာက သူ၏ ခံစားချက်ကို အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းမှုမှတဆင့် ယခုလိုပြောဆိုခဲ့သည်။“တန်ဖရဲမှာလည်း ကျွန်မတို့နေလို့မရဘူး။ အောင်မြင်သာမှာလဲ အခုထိ ပြေစာ မရသေးဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ကျွန်မတို့ က အရင်လူတွေ ဧည့်သည်တွေဘဲဖြစ် နေတယ်။ အဲ့တာကြောင့်ကျွန်မတို့က ကိုယ့်ရဲ့ဌာနေဒေသ မြစ်ဆုံတန်ဖရဲ မှာဘဲ ကျွန်မတို့ ပြန်နေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ကျွန်မတို့က ဘာဆိုတာ ဘာမှမသိသေးဘူး။” ဟု ပြောသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လွန်ခဲ့သည့် စစ်အစိုးရလက်ထက်၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် တွင် ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်သည်။ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင် လျှင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသဘောတူစာချုပ်ကို ပြည်သူထံချပြမည်ဟု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စဉ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုချိန်ထိ အကောင် ထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/07/06/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80
အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက သာဝသယံဇာတထုတ်ယူမှုဟာ ပဋိပက္ခတိုးပွား စေတဲ့အတွက် ရပ်တန့်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (AOW)က ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကြေညာ ချက်ထုတ်ပြီး တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သဘာဝသယံဇာတတူးဖော်မှုတွေဟာ စစ်ပွဲ တွေကိုပိုဖြစ်ပွားစေပြီး ရခိုင်ပြည်သူတွေကို ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝရောက်အောင် ထပ်တွန်းပို့ပေးနေသလိုဖြစ်တာကြေင့် ဒီစီမံကိန်း တွေကို ရပ်တန့်ပေးဖို့ ရခိုင်ရေနံ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (AOW) က တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင့်တပ်တော် AA တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေပေမယ့် ရေနံတူးဖော်မှုတွေ ဟာ ပင်လယ်ရေနက်ထဲမှာ တူးဖော်နေတဲ့အတွက် ထောက်ပြတာလို့ ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (AOW) ရဲ့ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးကျော်ခိုင်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘော ဆန္ဒ မပါ ဘဲ ဒေသတွင်းက သယံဇာတတွေကို အတင်းအဓမ္မ တူးဖော်ထုတ်ယူနေတာကြောင့် ရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။ “ရခိုင်မှာရှိတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဗဟိုကပဲ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဗဟိုကပဲ စီမံတယ် သုံးစွဲ တယ်။ လုပ်ချင်သလိုလုပ်တယ်။ ပြည်နယ်တွေမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမရှိဘူး” ရခိုင်မှာ မြန်မာအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံက ရေနံတူးဖော်မှုစီမံကိန်းကြီးတွေမရပ်ဆိုင်းဘူးဆိုရင် ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ သြစတေးလျ အစိုးရကို တင်ပြသွားမယ်လို့လည်း AOW အဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းတွေ ရပ်တန့်ဖို့ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ရှိလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ဗဏီ ၁၃ ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး Australia Woodside Energy နဲ့ French Tatal ရေနံကုမ္ဗဏီတွေဟာ ရေနံရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး အသစ်တွေ့ရှိတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်တွေက ထွက်လာတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေကို ထိုင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေဆီ တင်ပို့ဖို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက လက်မှတ်ထိုးသဘောထူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကစပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင့် တပ်တော် AA တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း အရပ်သားပြည်သူ အနည်းဆုံး တရာ့ငါးဆယ်ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ငါးရာကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း၊ ကျေးရွာပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်က ရခိုင်နဲ့ ချင်းရွာသားပေါင်း ၂ သိန်းကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသ စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့် သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်း ရာနဲ့ချီရှိ နေတယ်လို့ ရခိုင်ရေနံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ AOW ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ https:// .rfa.org/burme se/news/arakan-oil-watch-statement-rakhine-nautral-gas-project-070820202
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မယ်လ ကရင် ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း ဇုန် (B5-A)ရှိ နေအိမ် တစ်လုံးပေါ် သစ်ပင်လှဲကျ ၍ နေအိမ် တွင် နေထိုင်သူ ၅ ဦးအနက် အသက် (၁၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်မှာ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိ၍ မဲဆောက်မြို့ ဆေးရုံကြီးသို့ အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်လိုက်ရကြောင်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
ယနေ့နံနက် ၃ နာရီအချိန်ခန့်တွင် လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အိမ်နံပါတ် (၂၈၄)ရှိ စောရိန်းဂျာ နေအိမ်ပေါ်သို့ နေအိမ်ဘေး နားရှိ သစ်ပင်ကြီး လှဲကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နေအိမ်အတွင်း အဖိုး၊ အဖွား၊ ဦးလေး တော်စပ်သူ မိသားစု (၅)ဦးနှင့် အတူနေထိုင် သည့် နော်သောထူးမှာ သစ်ပင်ပိကျ၍ အပြင်းအထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု စခန်း ရပ်ကွက်တာဝန်ခံ နော်မအေးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကလေးမလေးက အိမ်အပေါ်ဘက်မှာ အိပ်တာ။ သူ့အဖွားတွေက အိမ်အောက်ဘက်မှာ အိပ်တာ။ ထိသွားတာ ခေါင်းကိုအဓိက ထိသွားတာ။ နည်းနည်းကလေး လှုပ်တာနဲ့ သွေးထွက်ရော။ မျက်နှာတစ်ခု လုံးလည်း ဖုရောင် နေတယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ အဆိုပါ သစ်ပင်လှဲကျခြင်းကြောင့် နေအိမ်တစ်ခုလုံး ပြိုကျပျက်စီးသွားပြီး အဆိုပါ ပြိုကျပျက်စီး မှုအတွက် စခန်းတွင်းတာဝန်ရှိသူများမှ ပြန်လည်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ပေးရန် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရ သည်။ http://kicnews.org/2020/07/%e1%80%99 %e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9c-%e1%80%92%
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ နောင်ချိုမြို့နယ်မှာ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၄,ဝ၀ဝ လောက် တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းဖြူနဲ့ စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီး ကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲလောက်က မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာ နောင်ချို – ရပ်စောက် သွားကားလမ်းမှာ ရှာဖွေစစ်ဆေးနေတုန်း လားရှိုးမြို့နေ စိုင်းစံမြင့်(ခ)မာန်အောင် မောင်းနှင်ပြီး အောင်သောင်း ၂၆ နှစ် လိုက်ပါလာတဲ့ မြေသယ်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးရာမှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာပါ။
ယာဉ်ပေါ်မှာ သိုဝှက်သယ်ဆောင်လာတဲ့ ပလတ်စတစ်ကပ်ခွာအိတ်တွေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြား ၈၀ဝ,ဝဝဝ (ဒေသ ကာလပေါက်ဈေး တန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း ၁၆၀ဝဝ)၊ ရောင်စုံ ဆပ်ပြာခွက်တွေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ဘိန်းဖြူ ၂၆ ဒသမ ၁၈ ကီလို (ဒေသကာလ ပေါက်ဈေး တန်ဖိုးငွေကျပ် ၇၈၅၄ သိန်း)၊ လက်ကိုင် ဖုန်း ၃ လုံး၊ မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြား ၂ ခုနဲ့ မြန်မာ ငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကို နောင်ချိုမြို့မရဲစခန်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူပြီး ကွင်းဆက်ဖော်ထုတ် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/398631
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင်အတွင်းသို့ တဖက်နိုင်ငံမှတဆင့် တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် မွတ်စလင် ၂၃ ဦးကို လဝက ဥပဒေဖြင့် တရား စွဲဆိုခဲ့ပြီး မောင်တောမြို့နယ် တရားရုံးနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တရားရုံးတို့က ဇူလိုင်လ ၂ ရက် နေ့မှ စတင်ကာ ထောင်ဒဏ် ၆ လ စီ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မောင်တောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ စာရင်းပေးပို့ချက်အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသူများအနက် ပထမအသုတ်အနေဖြင့် မွတ်စလင် ၄၄ ဦးအား ယခုလ အစကပင် တရားမဝင် ခိုးဝင်မှု လဝက ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ ( ၁ )၊ အား ပေးကူညီမှု ၁၃ ( ၅ ) တို့ဖြင့် အသီးသီး အမှုဖွင့်ကာ တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုလူများအနက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည့် ၂၃ ဦးမှာ ခိုးဝင် ၁၉ ဦးနှင့် အားပေးကူညီသူ ၄ ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း မောင်တောခရိုင်လဝကရုံးမှ ဒုညွန်ကြားရေးမှူး ဦးထိန်လင်း က ပြောသည်။ ဒုညွန်ကြားရေးမှူး ဦးထိန်လင်းက “ကျနော်တို့က ဖမ်းထားတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး က လူစာရင်းတွေပေးပြီး တရားစွဲဖို့ ညွှန်ကြားလာတဲ့အတွက် ကျနော်တို့က စိစစ်ပြီး အရေးယူတာ။ အခုကတော့ ခိုးဝင်မှုနဲ့ ၁၉ ဦးနဲ့ အားပေးကူညီမှုနဲ့ ၄ ဦးကို တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်လိုက်တာရှိတယ်။”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပထမအသုတ်အနေဖြင့် ၄၄ ဦးကို တရားစွဲရာတွင် ၁၂ နှစ်အောက်နှင့် ၁၈နှစ်အောက် ကလေးများ ပါနေသည့်အတွက် ကလေးသူငယ်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခဲ့ပြီး အာမခံပေးခြင်းများလည်းရှိကြောင်း၊ တချို့အားမိဘအုပ်ထိန်းသူများလက်သို့ပြန် လည်လွှဲပေးခဲ့ကြောင်း၊ တချို့မှာ Quarantine ဝင်နေသူများလည်း ပါဝင်နေသည့်အတွက် အသေးစိတ်ပြန်လည်စိစစ်နေ ကြောင်း သူက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။ ယင်း ၄၄ ဦးထဲတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူများလည်း ပါဝင်နေသဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူ နေရသကဲ့သို့ ယင်းတို့အနက် လူ ၃ ဦးမှာ လက်ရှိ ဆေးစစ်ချက်များအရ ရောဂါပိုးမတွေ့ရတော့သော်လည်း Quarantine ဝင်ခိုင်းထားဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တဖက်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှ တရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူများအား တရားစွဲဆိုသည့် လဝက ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ ( ၁ ) ၊ ၁၃ ( ၅ ) တို့မှာ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင် ဒဏ် ၆ လမှ ၇ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းရွှေက “ နယ်စပ်ကနေ ဝင်ချင်သလို ဝင်၊ ထွက်ချင်သလို ထွက်ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောပေါင်းလည်းများနေပြီ။ အစိုးရက ဒီလိုပဲ လက်ခံနေမယ်ဆိုရင်လည်း လက်ခံပါ။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ကို ရခိုင် ပြည်နယ်တခုတည်းမှာ မထားဘဲ လွတ်လပ်စွာ သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါ”ဟု ပြောသည်။ မောင်တောအရေးခင်းကြောင်း တဖက် နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားများသူများအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဖြင့် တဦးတယောက်မှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမှု မရှိသေးသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိ ဆန္ဒအလျှောက် တရားဝင် သတင်းပို့ကာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ၆၀ဝ ကျော်ရှိကြောင်းလည်း မောင်တောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ စာရင်းအရ သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/07/09/225977.html
၁။ ကနျ့ကှကျမှုကွား လဲခြားမွို့နယျ အတှငျး ကြောကျမီးသှေးတူးရနျ ကုမ်ပဏီ ကွိုးစားနေ
၂။ ကဘူဒမျးစဈရှောငျမြား နရေပျပွနျလိုကွောငျး ပွောဆို
၃။ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျရခကျနကွေောငျး KNU ပွော
၄။ ဟားခါးမွို့မှာ လှတျလပျရေးကြောကျတိုငျ စိုကျထူမယျ့ကိစ်စ ဝဖေနျခံနရေ
၅။ ကရငျစာ သငျရိုးသဈမှမျးမံသငျတနျး ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ပွုလုပျ
၆။ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးအခြို့ကို KNP ထုတျပွနျ
၇။ တအာငျး(ပလောငျ)အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးမွောကျရှိ မဲဆန်ဒနယျမွကေိုးခုတှငျ အဓိကထား ယှဉျပွိုငျမညျ
၈။ “ဝ” အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျးတှငျ အဓိကဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ
၉။ SNLD ပါတီအနဖွေငျ့ မူဆယျခရိုငျအတှငျးရှိ မဲဆန်ဒနယျမွအေားလုံးတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား ဒသေခံမြား၏ ဆန်ဒသဘောထားဖွငျ့ ရှေးခယျြမညျ
၁၀။ UNA အဖှဲ့ဝငျခငျြး ရှေးကောကျပှဲမဲဆန်ဒနယျတူလြှငျ အားသာခကျြရှိသညျ့ပါတီ အနိုငျရရေး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမညျ
၁၁။ ရိက်ခာပွတျနသေညျ့ ဒါးလကျသို့ ဆနျပို့ပါက အုပျခြုပျရေးမှူးထံမှ ခှငျ့ပွုခကျြ ယူရမညျဟုဆို
၁၂။ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ဟုဆိုကာ ဝဘေူလတောငျတှငျ ကုမ်ပဏီတဈခုက သတ်တုတူးဖျောရေး ဆောငျရှကျနေ
၁၃။ ကှတျခိုငျမွို့နယျ ပေါကျကှဲမှု ဖွဈ ဒသေခံ ၇ ဦး ထိမှနျ
၁၄။ သတ်တမတနျး သငျရိုးညှနျးတမျးအသဈမှာ ကယား(ကရငျနီ)မြိုးနှယျစုအမညျတခြို့ စာလုံးပေါငျးသတျပုံနှငျ့ ရိုးရာ ဓလေ့ အကွောငျးမှားနေ
၁၅။ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကယားပွညျနယျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး မဲဆန်ဒနယျမြား၌ ကယနျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုး မဲဆန်ဒနယျ ထညျ့သှငျးသတျမှတျပေးရနျ ကယနျးအမြိုးသားညီညှတျရေး ဦးဆောငျကျောမတီ တောငျးဆို
၁၆။ ကရငျလူငယျထု တဈရပျလုံးအတှကျအရေးပါမညျ့ ကရငျလူငယျမဟာဗြူဟာမူကွမျးတဈခု ထှကျရှိမညျ
၁၇။ MCL ဘိလပျမွစေကျရုံ ရပျနားတော့မညျ့ သတငျးထှကျပျေါ၊ အလုပျသမား ၁၅၀ဝ ကြျော အလုပျလကျမဲ့ဖွဈမညျကို စိုးရိမျနေ ဟုဆို
၁၈။ မိုးရှာတိုငျး တနျ့ယနျး လှယျလှမျ့ ပရဟိတကြောငျးသားမြား ရှံထဲတှငျ စာသငျနရေ
၁၉။ မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ဇူလိုငျ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ အပွီးသပျရှေးခယျြမညျ
၂၀။ ရခိုငျမှာ စဈတပျဖမျးထားသူ ၁၁ ဦး အကွမျးဖကျဥပဒနေဲ့အမှု ဖှငျ့ခံရ
၂၁။ မွဈဆုံစီမံကိနျး အပွီးတိုငျရပျဆိုငျးပေးရေ စာခြှနျတျောထုတျပေးရနျ နပွေညျတျောတရားလှတျတျောသို့ ပွနျလညျ လြှောကျထား
၂၂။ ရခိုငျပွညျနယျက ရနေံနဲ့ သဘာဝသယံဇာတ စီမံကိနျးတှေ ရပျတနျ့ဖို့ AOW တောငျးဆို
၂၃။ မယျလ ဒုက်ခသညျစခနျးတှငျ နအေိမျပျေါ သဈပငျလှဲကြ၍ အမြိုးသမီးငယျ ၁ဦး ပွငျးထနျစှာ ဒဏျရာရ
၂၄။ နောငျခြိုတှငျ ငှကေပျြသိနျးပေါငျး ၂၄,ဝဝဝ ခနျ့ တနျဖိုးရှိ မူးယဈဆေးမြား ဖမျးမိ
၂၅။ နယျစပျမှ ခိုးဝငျ မှတျစလငျ ၂၃ ဦးကို ထောငျ ၆ လခမြှတျ
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လဲခြားမွို့နယျ ဟဲဆိုငျကြေးရှာအုပျစုရှိ ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောနိုငျရနျအတှကျ ကုမ်ပဏီတခု မှ ဆကျ လကျကွိုးစားနကွေောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
ဇူလိုငျလ ၆ ရကျက လဲခြားမွို့နယျ ဟဲဆိုငျကြေးရှာအတှငျး ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောရနျအတှကျ ကုမ်ပဏီ တခုက လူလှတျ၍ ဟဲဆိုငျကြောငျးတိုကျ ဆရာတျောထံ သှားရောကျဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။“ဟဟေိနျးကုမ်ပဏီက လူ ၅ ယောကျ လောကျ ကြောငျးကို ရောကျလာတယျ။ ကြောကျမီးသှေးတူးဖို့အတှကျခှငျ့တောငျးတယျ။ ဆရာတျောတို့ အနနေဲ့ ကနျ့ကှကျ ထားပါတယျ။ ကနျ့ကှကျထားတာတှပွေနျရုပျသိမျးပေးဖို့လာပွောသှားတယျ ” ဟု ဟဲဆိုငျ ကြောငျးတိုကျမှ ဆရာတျော က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို မိနျ့ကွားသညျ။ ဟဲဆိုငျကြေးရှာ အတှငျး ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောရနျအတှကျ ကုမ်ပဏီဘကျမှ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးမြား၊ ဒသေခံမြားထံ မကွာခဏလာရောကျ စညျးရုံးခဲ့သျောလညျး တစုံတဦးမှ လကျမခံသဖွငျ့ ဆရာတျောထံ လာရောကျခှငျ့တောငျးခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
၎င်းငျးစီမံကိနျးနှငျ့ပတျသကျ၍ မေးမွနျးရနျအတှကျ အဆိုပါ ကုမ်မဏီ၏ လူမြားနှငျ့ဆကျသှယျမှုရရှိရနျ သြှမျးသံတျောဆငျ့မှ ကွိုး စားနဆေဲဖွဈပါသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ ဖဖေျောဝါရီ လ တှငျလညျး လဲခြားမွို့နယျ နောငျယာဆိုးငျကြေးရှာအတှငျး ကြောကျမီး သှေး တူးဖျောရနျ ဝမျပနျပွညျသူ့စဈ ခေါငျးဆောငျ ခူးဒေါန မှလညျး ဒသေခံမြား နှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့သေးကွောငျး ဒသေခံမြား ပွော ပွခကျြအရသိရသညျ။ လဲခြားမွို့နယျ ဟဲဆိုငျကြေးရှာအတှငျး ကြောကျမီးသှေးတူးမညျ့ ကိစ်စကို လှနျခဲ့သညျ့ ၄လ ခနျ့က မွို့နယျ သံဃာမြားနှငျ့ အစညျးအဝေး ပွုလုပျခဲ့ပွီး၊ ကနျ့ကှကျထားကွောငျး လဲခြားမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၁) ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးကြျောဇယြေ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“သံဃာတျောတှေ ပွညျသူတှကေ သဘောတူညီမှုမပေးရငျ ကနြျောတို့လညျး ပွညျသူတှဘေကျကပဲ ရပျတညျသှားမှာပါ”ဟု စိုငျးကြျောဇယြ က သြှမျးသံ တျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
ဟဲဆိုငျကြေးရှာအုပျစုရှိ ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောရနျ အတှကျ (၅၀ဝဝ) ဧက ဝနျကငျြးခနျ့လြားထားပွီး၊ တူးဖျောမှုရရှိရနျ အတှကျ သံဃာတျောမြား၊ ဒသေခံမြားကို သကျဆိုငျရာ ကုမ်ပဏီ က စညျးရုံးနခွေငျးဖွဈသညျ။ လကျရှိမှာ လဲခြားမွို့နယျ နမျ့လငျးကြေးရှာတှငျ လှိုငျဂယျြနဂါး ကုမ်ပဏီ မှ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှ ၂၀၂၀ ခုနှဈ အထိ ၁၀ နှဈ သကျတမျး ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောခှငျ့ရရှိထားသညျ။ ထို နမျ့လငျးကြေးရှာ အနီး ကြောကျမီးသှေး တူးဖျောမှုကွောငျ့ ဒသေခံမြား၏ စိုကျပြိုးရေး အတှကျ ရမြေားခမျးခွောကျခွငျး၊ လယျယာမွမြေား ထိခိုကျခွငျးတို့ကို ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေကွောငျးသိရသညျ။ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လဲခြားမွို့နယျအတှငျး တူးဖျောနသေညျ့ ကြောကျမီးသှေး စီမံကိနျးမြား ရပျဆိုငျးရနျ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ စကျတငျဘာ တှငျ ဒသေခံ (၇၀ဝ) ကြျော ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့သညျ။ https://burmese.sh annews.org/archives/17410
မွဈကွီးနားမွို့ အေးမွသာယာရပျကှကျအနီး နနျးကှအေု့ပျစု၊ ကဘူဒမျးကြေးရှာရှိ စဈရှောငျမြားက ၎င်းငျးတို့၏ မူလနရေပျသို့ ပွနျကာ ပွနျလညျအခွခေနြထေိုငျလိုကွောငျး ပွောဆိုနကွေသညျ။ အဆိုပါ ကဘူဒမျးကြေးရှာရှိ စဈရှောငျပွညျသူမြားမှာ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဟူးကောငျး လီဒိုလမျးမ တိနျးကောကျကြေးရှာအနီးတှငျ တပျမတျောနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIA တို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့သဖွငျ့ ထှကျပွေးလာခဲ့သော ရဝမျကုနျးကြေးရှာသားမြား ဖွဈကွသညျ။ လကျရှိ ကဘူဒမျးကြေးရှာတှငျခိုလှုံ နသေော မွနေရောသညျ လာမညျ့ ၂၀၂၁ တှငျသကျတမျးကုနျဆုံးတော့မညျဖွဈသဖွငျ့ စာခြုပျမကုနျခငျ နရေပျပွနျလိုကွောငျး ပွောဆိုနကွေသညျ။
“ဒီမှာနတေဲ့ စဈရှောငျတှကေ အိမျပွနျခငျြတာကွာလှပါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဒီနရောမှာ ဆကျနဖေို့က အဆငျမပွတေော့ဘူး။ အဓိကတော့ အခုသူတို့နထေိုငျနတေဲ့ စခနျးမွနေရောကို ၃ နှဈသာ နထေိုငျဖို့စာခြုပျ ခြုပျထားတာ ဖွဈတယျ။ အခုဆိုအခြိနျက တဈနှဈကြျောကြျောသာကနျြတော့တယျ။ အဲ့လိုအနအေထားတှဖွေဈနတေယျ။ သူတို့ကရှာကိုပွနျခငျြနပွေီ။”ဟု ကဘူဒမျးစဈရှောငျတာဝနျခံ ဦးဆနျနိုငျဖီ က ပွောဆိုသညျ။ ၎င်းငျးတို့က မိမိအစီအစဉျဖွငျ့ နရေပျပွနျခငျြသျောလညျး လုံခွုံရေးအရ စိုးရိမျမှုရှိနသေညျ့အပွငျ ပွနျလညျထူထောငျရေးလုပျငနျးမြားကိုလညျး ထိထိရောကျ ရောကျ ဆောငျရှကျပေးစလေိုကွောငျး သူကပွောဆိုခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ လကျရှိ Covid-19 ရောဂါဖွဈပှာသညျ့ကာလတှငျ စဈရှောငျစခနျးပွညျသူမြား၏ စားဝတျနရေေး အကွပျအတညျး ဖွဈလာသညျဟု ဆိုသညျ။“နရေပျပွနျတာကို အလှနျလိုလားနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီမှာနရေတာ နရေထိုငျရ တာလညျး ကဉျြးကွပျတယျ။ ကိုယျသှားခငျြသလိုလညျးသှားလို့မရဘူး။ အမြားရဲ့လကျအောကျမှာ နရေတာဖွဈတယျ။ နရေ တာလညျး လှတျလပျမှုမရှိဘူး။ ကိုယျ့ခွံကိုယျ့ဝနျးနဲ့နခေငျြပွီ။ ကိုယျ့နရောမှာဆို ဘယျလောကျဘဲ ခကျခဲခကျခဲ နနေိုငျတယျ” ဟု စဈရှောငျတဈဦးဖွဈသညျ့ ဒျေါမရေမျက ပွောဆိုထားသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အစိုးရအနဖွေငျ့ စဈရှောငျမြားကို ကူညီထောကျပံ့ ပေးရနျနှငျ့ နရေပျပွနျရေးကို အမွနျအကောငျထညျဖျောပေးရနျ မြှျောလငျ့ကွောငျး ဆကျလကျပွောဆိုသညျ။ လကျရှိ ကဘူဒမျး စဈရှောငျစခနျးတှငျ ရဝမျမြိုးနှယျစု အိမျထောငျစု ၁၄စု နှငျ့ လူဦးရေ ၄၁ ယောကျရှိနကွေောငျး သိရသညျ။
၂၀၁၇ တိနျးကောကျကြေးရှာအနီးတဝိုကျတှငျ မွနျမာစဈတပျနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော(KIA) တိုကျပှဲမြား ပွငျး ထနျစှာဖွဈပှားခဲ့သညျသာမက မွနျမာစဈတပျဘကျမှ ဒသေခံမြားကို KIA စဈသားမြားအဖွဈ ထငျမွငျမှာယှငျးကာ ညှဉျးပမျး နှိပျစကျမှုမြား လုပျဆောငျခဲသဖွငျ့ ရဝမျးကုနျးဒသေခံမြားက မွဈကွီးနားသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ စဈရှောငျ မြားနရေပျပွနျနိုငျရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး အစိုးရနှငျ့ကခငျြလူသားခငျြစာနာထောကျထားရေးအဖှဲ့ (KHCC)တို့ ပူးပေါငျးပွီး နရေပျ ပွနျပို့ပေးသညျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားရှိနသေညျ့အတှကျ ၎င်းငျးတို့လညျး ထိုနညျးတူ နရေပျပွနျလိုကွောငျး ပွောဆိုနကွေသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/07/07/%e1%80%80%e1%80%98%e1%80%b0%e1%80%92%e1
တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ NCA လကျမှတျထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့တှကွေား ယုံကွညျမှုတှေ တိုး တကျလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ခဲ့ပမေယျ့ တိုကျပှဲတှဖွေဈပှားခဲ့တာဟာ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးပူးတှဲ စောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ JMC-U ရဲ့ လုပျငနျးတှေ ကောငျးစှာမလညျပတျနိုငျသေးတာကို ဖျောပွနတေယျလို့ ကျောမတီ ဒု ဥက်ကဋ်ဌ ၁ ဗိုလျခြုပျ စောအိုငျးဇကျဖိုးက သတိပေးပွောကွားလိုကျပါတယျ။ အပဈရပျစာခြုပျမှာ လကျမှတျထိုးထားတဲ့ တိုငျးရငျး သားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တခြို့နဲ့ တပျမတျောကွား တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့တဲ့အတှကျ ယုံကွညျမှုလြော့နညျးပွီး ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေး နှေးပှဲတှရေပျတနျ့နပေါတယျ။
ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး KNU ရဲ့ ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈသူ JMC-U ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ ၁ ဗိုလျခြုပျ စောအိုငျးဇကျဖိုး က လကျမှတျထိုးထားတဲ့အဖှဲ့တှကွေား တိုကျပှဲဖွဈတာက ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေး လုပျငနျးပိုငျးမှာ အားနညျးခကျြတှေ ရှိနတောကွောငျ့လို့ ပွောပါတယျ။ “တဈဦးနဲ့တဈဦး တဈဖကျနဲ့တဈဖကျအကွား ယုံကွညျမှုမြား တိုးတကျ မြားပွားလာမညျဟု မြှျောလငျ့ထားသျောလညျး ယငျးမြှျောလငျ့ခကျြမြား လကျတှဖွေ့ဈမလာသေးပါ။ ယငျးအစား NCA စာခြုပျ ကို လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားအကွား တိုကျပှဲမြားဖွဈပျေါနခွေငျးမှာ အထူးစိုးရိမျရမညျ့ အခွအေနေ မဟုတျ သျောလညျး JMC ရဲ့ တာဝနျရှိတဲ့လုပျငနျးမြား ကောငျးစှာလညျပတျလာနိုငျခွငျးမရှိခွငျးကို အထူးအလေးထား သတိခပျြရမှာ ဖွဈပါတယျ။”
ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ JMC-U အစညျးအဝေး ဆိုရငျ တဈနှဈနဲ့ ၁၀ လကြျောကွာ ရပျတနျ့ခဲ့ပွီး ၁၉ ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးကို နပွေညျတျောမှာ ပွနျလညျကငျြးရာမှာ ဗိုလျခြုပျ စောအိုငျးဇကျဖိုးက ထောကျပွပွောကွားခဲ့တာပါ။ JMC ရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံကပူးတှဲမှုဆိုတဲ့ပုံစံထကျ ပူးပေါငျးမှုပုံစံဖွဈနတေဲ့ အခကျြ အပွငျ လကျတှမွေ့ပွေငျမှာနှဈဖကျတပျဖှဲ့တှေ ပဋိပက်ခမဖွဈအောငျ ဆောငျရှကျရမယျ့လုပျငနျးပိုငျးမှာ အားနညျးခကျြရှိတာ ကွောငျ့ အပဈရပျလကျမှတျထိုးထားတဲ့အဖှဲ့တှေ နဲ့ တပျမတျောကွား တိုကျပှဲတှဖွေဈပှားခဲ့တာလို့ ဗိုလျခြုပျ စောအိုငျးဇကျဖိုး က ပွောပါတယျ။ အပဈရပျ ၁၀ ဖှဲ့မှာ အငျအားကွီး နှဈဖှဲ့ဖွဈတဲ့ KNU နဲ့ ရှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ RCSS/SSA အဖှဲ့ တို့ဟာ တပျမတျောနဲ့ နယျမွကြေျောလှနျ အငွငျးပှားမှုအပါအဝငျ တခွားအကွောငျးအရာတှနေဲ့ တိုကျပှဲဖွဈ တာ တှရှေိခဲ့တဲ့အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို ပွနျလညျသုံးသပျမယျဆိုပွီး အဲဒီ နှဈဖှဲ့က JMC နဲ့ UPDJC အစညျး အဝေးတှကေို တဈနှဈကြျော ကွာ မတကျရောကျခဲ့ပါဘူး။ တိုငျးရငျးသားအရေး၊ နိုငျငံရေးလလေ့ာသူ ဦးမောငျမောငျစိုး က JMC ရဲ့ အဓိကလုပျငနျးဖွဈတဲ့ တပျနရော ခထြားရေးကို အောငျမွငျအောငျညှိနှိုငျးဖို့ လိုတယျလို့ ပွောပါတယျ။
လာမယျ့ ဇူလိုငျလ ၃၀ နဲ့ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောခေါငျးဆောငျတှေ တကျရောကျမယျ့ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျ တိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ အကောငျထညျဖျောမှုဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး JICM၊ သွဂုတျလ ၁၀ နဲ့ ၁၁ ရကျ နမှေ့ာ UPDJC နဲ့ သွဂုတျလ ၁၂၊ ၁၃ နဲ့ ၁၄ ရကျနတှေ့မှော စတုတ်ထအကွိမျ ၂၁ ရာစုပငျလုံညီလာခံ အစညျးအဝေးတှေ ဆကျတိုကျကငျြးပသှားဖို့ ရှိပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/knu-says-hard-to-build-trust-07072020 053458.html
ခငျြးပွညျနယျ မွို့တျော ဟားခါးမွို့မှာ ကပျြသနျး ၆ဝ ကြျော အသုံးပွုပွီး လှတျလပျရေး ကြောကျတိုငျ၊ ဗိုလျခြုပျ ကွေးရုပျနဲ့ ပနျးခွံ တညျဆောကျမယျ့ကိစ်စကို ဝဖေနျမှုတှရှေိနပေါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု အနညျးဆုံးဒသေတှထေဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ခငျြးပွညျနယျမှာ လှတျလပျရေးကြောကျတိုငျနဲ့ ဗိုလျခြုပျ ကွေးရုပျအတှကျ ငှကေပျြသနျးပေါငျးမြားစှာ အကုနျအကခြံ ဆောကျရှကျမယျ့အစား အကူအညီ လိုအပျနသေူတှနေဲ့ ဒသေ ဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ လိုအပျနတေဲ့ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးတှမှော အသုံးခသြငျ့လို့ ထောကျပွမှုတှရှေိ နတောပါ။ အဲဒီကုနျကမြယျ့ ငှတှေကေို ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့ရောကျ စဈဘေးဒုက်ခသညျတှအေတှကျ အသုံးပွုသငျ့ တယျလို့ တီးတိနျလူငယျ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ကိုမုနျနိုက ထောကျပွပါတယျ။“အခုကကြှနျတျောတို့လညျး သိနေ တာပဲ။ ပလကျဝမှာ စဈဘေးရှောငျဒုက်ခသညျတှေ ဘယျလောကျထိ ဒုက်ခရောကျနလေဲဆိုတာ တဈခကျြပွနျပွီးတော့မှ စဉျးစား ကွညျ့စခေငျြတယျ။ ဒီသနျး ၆၀ လုံး ကုနျပွီးတော့မှ ဒီလှတျလပျရေးကြောကျတိုငျ စိုကျထူတာထကျ စဈဘေးဒုက်ခခံနရေတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ ဒီထကျမြားမြားပံ့ပိုးနိုငျအောငျလုပျဆောငျသငျ့တယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ လှတျလပျရေးကြောကျတိုငျတို့ ဘာတို့ စိုကျရမယျ့ အခြိနျမဟုတျဘူးလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ” တညျဆောကျမယျ့ လှတျလပျရေးကြောကျတိုငျဟာ အမွငျ့ပေ ၇၅ ပရှေိပွီး အခငျြးကတော့ ၁၄ ပေ ရှိပါတယျ။
ကုနျကငြှေ သနျး ၆၀ ဟာ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါလို့ သတျမှတျထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အန်တရာယျကာလ New Normal လို့ ချေါကွတဲ့ လူနမှေုပုံစံသဈမှာ လိုအပျလာမယျ့ အခွအေနတှေအေတှကျ ဖွဈသငျ့တယျလို့ ယူဆတဲ့ ဒသေခံတှလေညျး ရှိနေ ပါတယျ။“အခု ကြောကျတိုငျတှေ စိုကျတယျ။ ရုပျတုတှလေုပျတာက လာလညျတဲ့လူတှေ မွငျစခေငျြလို့ ကြှနျတျော သဘော ပေါကျတယျ။ ကိုဗဈ ၁၉ ကလညျး ဖွဈနတောဆိုတော့ ဘယျသူမှလညျးလာမှာ မဟုတျဘူး။ အဲတော့ ဘယျသူ့မှ ကွညျ့မယျ့ သူမရှိတဲ့ ရုပျတုတှေ၊ ကြောကျတိုငျတှေ ထားမယျ့အစားတော့ ခငျြးပွညျနယျမှာ New Normal Life အတှကျ ဘာမှအဆငျ
သငျ့မဖွဈဘူး။ ပွငျဆငျထားတာတှလေညျး မရှိဘူး။ သူမြားနိုငျငံတှမှောဆိုရငျ ကိုဗဈ ၁၉ ဖွဈပွီး လူအခငျြး ခငျြးတှလေို့မရတဲ့ Lockdown စပွီး ကွညောပွီး ၅ နာရီအတှငျးမှာ သူတို့ အှနျလိုငျးရောကျသှားကွပွီ။ စီးပှားရေးတှေ အှနျလိုငျးမှာ လုပျကွ တယျ။ ပညာရေးတှကေို အှနျလိုငျးမှာ ဆကျပွီးလလေ့ာကွတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကိုဗဈဖွဈတာ ရငျဆိုငျ လာတာ တျောတျော ကွာပွီပေါ့နျော။ တကယျတမျးဖွဈတာက ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာမှာ ဆိုတော့ အခု ၆ လ ၇ လ အတှငျးကို ရောကျနပွေီ။ ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ ဘာတှပွေငျဆငျနပွေီလဲပေါ့နျော။ အဲဒါ မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈတယျ”ဒသေခံ တဈဦး ဖွဈတဲ့ ကိုမိုကျကယျ ဆှမျးတ ပွောသှားတာပါ။ ဒသေခံတှေ ဝဖေနျကနျ့ကှကျပမေယျ့ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ကတော့ ဆကျလကျအကောငျ အထညျ ဖျောသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ခငျြးပွညျနယျမှာ အရငျက ဗိုလျခြုပျကွေးရုပျနဲ့ ပနျးခွံရှိပမေယျ့ လှတျတျောတညျ ဆောကျခြိနျမှာ ဖယျရှားခဲ့ရတာ ဖွဈ တယျလို့ ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးစိုးထကျက ဆိုပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျ ၁ ရကျနကေ့ လှတျလပျရေး ကြောကျတိုငျ တညျဆောကျရေးလုပျငနျး စတငျနိုငျဖို့အတှကျ ခငျြးပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျ အုပျမွဈခြ အခမျးအနား တကျရောကျဖှငျ့လှဈပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အလားတူ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈကလညျး ကယားပွညျနယျ လှိုငျကျောမွို့မှာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးကွေးရုပျ တညျဆောကျတာကို ဒသေခံတှကေ ကနျ့ကှကျခဲ့ပမေယျ့ ပွညျနယျအစိုးရက အကောငျအထညျဖောငျ ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကနျ့ကှကျရာမှာ ဦးဆောငျခဲ့တဲ့ ကရငျနီလူငယျ ခွောကျဦးဟာလညျး ထောငျဒဏျ ၆ လ ပွဈဒဏျခခြံခဲ့ရပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/independence-
အသဈပွဌာနျးလိုကျသညျ့ ပိုး၊ စကောကရငျစာ သငျရိုးညှနျးတမျးအသဈကို ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ခလယျ -တံခှနျတိုငျတိုကျနယျ ဇီးဖွူရိပျမွုံနရောတှငျ မွို့နယျ၏ သငျတနျးဌာန အမှတျ ၁ အနဖွေငျ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ သငျတနျး ဖှငျ့လှဈ သှားခဲ့ကွောငျး သငျတနျးတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။ သငျတနျးကို ဇူလိုငျ ၂ ရကျမှ ၅ ရကျနအေ့ထိ သငျကွားပို့ ခသြှားခဲ့ပွီး နညျးပွဆရာမြားနှငျ့သငျတနျးသား ကရငျစာသငျ ဆရာ/ဆရာမ ၃ဝဝ နီးပါး ပို့ခသြငျကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
သငျတနျးနညျးပွဆရာ စောယောငျ့သာအဲဆနျက “စာပကေို မွှငျ့တငျတဲ့အနနေဲ့ ရညျရှယျပွုလုပျတာပါ။ အစိုးရ အတနျး ကြောငျးမှာ အသကျအရှယျအလိုကျ ကလေးတှေ သငျယူနားလညျရလှယျပွီး လကျတှနေ့ားလညျနိုငျအောငျ သငျရိုးအသဈ တဈခုကို သငျကွားနညျးစနဈ ခပြွတာပေါ့နျော။ ပိုး၊ စကောကရငျစာပါ ဒီသငျတနျးမှာ သငျကွားပေးပါတယျ”ဟု ကအေိုငျစီ သို့ ပွောသညျ။ အရှပေို့းကရငျ (လိကျထူ့လီ) စာ တကျရောကျသငျကွားသူ ၂ဝ၁ ဦးနှငျ့ စကောကရငျစာ သငျကွားသူ ၃၇ ဦး တို့ကို ၎င်းငျးတို့၏ ဆိုငျရာစာပေ သငျရိုးအသဈ သငျကွားမှုနညျးစနဈမြားကို သငျတနျးဆရာမြားမှ သငျကွားပေးပွီး ကရငျစာပေ စှမျးရညျမွှငျ့တငျ သညျ့အနဖွေငျ့ စာစီစာကုံးပွိုငျပှဲမြားပါ သငျတနျးနောကျဆုံးနတှေ့ငျ ထညျ့သှငျးကငျြးပသှားခဲ့သညျဟု သိရ သညျ။
“သငျရိုးနညျး ပွောငျးသှားတယျ။ ကလေးတှနေားလညျအောငျ ကဗြာတှေ၊ သီခငျြးတှေ ရုပျပုံတှနေဲ့ပါ တှဲပွီးသငျကွားတာ ပေါ့။ နစေ့ားလပေး သငျနတောဆိုတော့ ကြောငျးပိတျရကျတှမှော ထောကျပံ့မှု မရဘူးပေါ့နျော။ ကရငျစာပနေဲ့ ယဉျကြေးမှု မပြောကျ အောငျ ထိနျးသိမျးစခေငျြလို့ ဆရာမလုပျဖွဈတာပါ။ အတိုငျးအတာ တဈခုအထိ ထောကျပံ့ပေးတဲ့အပျေါ အမြားကွီး ကြေးဇူးတငျပါတယျ”ဟု အရှပေို့းကရငျစာသငျ ဆရာမနောငျဖော့အဲ့ကုံက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ကွာအငျးဆိပျကွီး မွို့နယျအနဖွေငျ့ ကရငျစာသငျရိုးညှနျးတမျးအသဈ သငျတနျးဌာန ၁ ကို ၄ ရကျကွာသငျကွားပေးခဲ့ပွီးနောကျ သငျတနျးဌာန ၂ ကို ဝငျးရျောမွဈအရှဘေ့ကျခွမျးတှငျ ဆကျလကျဖှငျ့လှဈသှားရနျ အစိုးရပညာရေးဌာနနှငျ့ မွို့နယျ ကရငျစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့တို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဟု သငျတနျးတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020 /07/%e1%80%80%e1%80%9b%e1
နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး အခြို့နှငျ့ ဝငျပွိုငျမညျ့ မဲဆန်ဒနယျအခြို့ကို ကရငျအမြိုးသားပါတီ-KNPက ဇူလိုငျလဆနျးပိုငျးတှငျ စတငျထုတျပွနျလိုကျသညျ။
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးတှငျ အားပွုထားသညျ့ ကရငျအမြိုးသားပါတီသညျ ဧရာဝတီတိုငျး ကရငျရေးရာ မဲဆန်ဒ နယျအတှကျ ပါတီအတှငျးရေးမှူး-၁ မနျးမငျးရဲထှေး ဝငျပွိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျ တျောအတှကျ ပနျးတနျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ-၂ ၌ မနျးခငျမောငျအေး၊ ညောငျတုနျးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ-၁ တှငျ စောအာကာတိုး၊ ဝါးခယျမမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ -၁ တှငျ စစိုငျးခှနျသာတို့ အသီးသီးဝငျရောကျယှဉျ ပွိုငျသှားမညျဟု KNP က တရားဝငျသတငျးထုတျပွနျ ထားသညျ။ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကရငျတိုငျးရငျးသားရေးရာ မဲဆန်ဒနယျတှငျဝငျပွိုငျမညျ့ မနျးမငျးရဲထှေးက “ကနြျောတို့ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျတှကေ အရငျရှေးကောကျပှဲတှတေုနျးကလို မဟုတျတော့ဘူး။ နိုငျငံရေး ရခြေိနျမွငျ့လာပွီး၊ အမြိုးသားရေးကို လညျး သိလာပွီးဆိုတော့ ဘယျပါတီကို မဲပေးရမယျဆိုတာလညျး ခငျြ့ခြိနျတတျလာပွီးပေါ့နျော။ ဘယျသူ့ကို မဲပေးရမယျဆို တာပွောစရာမလိုတော့ဘူး။ နောကျအစိုးရ ဖွဈခဲ့တဲ့ပါတီတှကေိုအနနေဲ့ သူတို့ဘာတှကေတိပေးခဲ့သလဲ၊ ဘာတှလေုပျနိုငျသ လဲ၊ ဘာတှအေဓိကထားဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သလဲဆိုတာ မဲဆန်ဒရှငျတှေ သဘောပေါကျပွီးလို့ ပွောခငျြပါတယျ” ဟုပွောသညျ။
ကရငျပါတီမြားအနဖွေငျ့ အစိုးရဖှဲ့နိုငျသညျ့ အခွအေနေ မရှိသျောလညျး တိုငျးရငျးသားမြားစုပေါငျးကာ လှတျတျောထဲတှငျတိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားလုပျဆောငျနိုငျရေး အခွအေနမြေိုးဖွဈအောငျ ကရငျမဲဆန်ဒရှငျမြား ၏ သဘောထားတှငျလညျးမူတညျကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျပွောသညျ။ ကရငျအမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေ ကွီး မွောငျးမွ၊ အိမျမဲ၊ ကယားပွညျနယျနှငျ့ ပဲခူး တိုငျးဒသေကွီးတို့တှငျ ဝငျပွိုငျရနျပွငျဆငျထားပွီး ကိုယျစားလှယျလောငျး မြားကို ဆကျထုတျ ပွနျသှားမညျဟု ပါတီတာဝနျရှိသူမြားက ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ http://kicnews.org/2020/07/%e 1%80%b1%e1%80%9 b%e1%80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%
၇။ တအာငျး (ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးမွောကျရှိ မဲဆန်ဒနယျမွကေိုးခုတှငျ အဓိကထား ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျ မညျ
တအာငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျးအတှငျးရှိ မဲဆန်ဒနယျမွေ ကိုးခုတှငျ အဓိကထား ဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး ယငျးပါတီ၏ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး မိုငျးအုနျးခိုငျက ပွောကွားသညျ။
တအာငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ပလောငျ တိုငျးရငျးသားအမြားအပွားရှိသော နမျ့ဆနျ၊ မနျတုံ၊ နမ်မတူ၊ မူဆယျ၊ နမျ့ခမျး၊ ကှတျခိုငျ၊ ကြောကျမဲ၊ မိုးကုတျ၊ မိုငျးကိုငျ မဲဆန်ဒနယျမွမြေားတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ သှားမညျဖွဈပွီး ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ၁၈ နရော၊ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ကိုးနရောနှငျ့ အမြိုးသား လှတျတျောကိုယျစားလှယျ နှဈနရော စုစုပေါငျး ၂၉ နရောတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားရနျ လြာထားသညျ။ တအာငျး (ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျရေး၊ နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးမြား၊ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့၊ တနျးတူခှငျ့၊ စဈမှနျသောဖကျဒရယျ ဖှဲ့စညျးပုံပျေါပေါကျရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးစသညျ့ မူဝါဒမြား ခမြှတျထားကွောငျး တအာငျး (ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး မိုငျးအုနျးခိုငျက ပွောကွားသညျ။
“ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျပျေါပေါကျလာဖို့ပဲ အဓိကဦးတညျတယျ။ နယျမွအေေးခမျြး သာယာမှပဲ၊ တညျငွိမျမှပဲ ကနျြတဲ့ကဏ်ဍ တှေ လုပျဆောငျလို့ရမယျ။ ကနျြတဲ့ ဖှံ့ဖွိုးကဏ်ဍတှကေို ဒသေလိုအပျခကျြအရ လုပျဆောငျသှားဖို့ပဲ။ အားလုံးတော့ ၆၀၊ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။ အရငျနှုနျးထားထကျ မလြော့အောငျတော့ ကွိုးစားရမှာပါပဲ။ တအာငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာလညျး ပါတီမြားအားလုံး မဲကိုယျစားလှယျလောငျး အဆငျ့ (၅) ရထားတယျ။ ဖှံ့ဖွိုးရေး လုပျငနျးတှလေညျး တတျနိုငျသလောကျ လုပျတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးတှကေိုလညျး ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈမှာလညျး ပါတီကိုပဲ ထောကျခံအားပေးကွဖို့ ငွိမျးခမျြးရေး၊ ဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးသှားအောငျ ဖှံ့ဖွိုးရေး လုပျငနျးတှေ၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးလာအောငျ ဝိုငျးဝနျးကွပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ အဓိကအားဖွငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး၊ အလုပျအကိုငျ ရရှိရေးတှပေေါ့”ဟု မိုငျးအုနျးခိုငျက ပွောကွားသညျ။
တအာငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီကို ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈ မလေတှငျ စတငျဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေး ကောကျပှဲတှငျ ကိုယျစားလှယျ ခွောကျနရော၊ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကိုယျစားလှယျ ၁၂ နရော အနိုငျရ ရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/181946
“ဝ”အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျးကို အဓိကအားပွု၍ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈကွောငျး ယငျး ပါတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးဆမျးဆောငျကားက ပွောကွားသညျ။ ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ ရှမျးပွညျနယျ အရှပေို့ငျး ဟိုပနျ၊ မကျမနျး၊ မိုငျးမော၊ ပနျဝိုငျ၊ နားဖနျးနှငျ့ ပနျဆနျးစသညျ့ မွို့နယျ ခွောကျခုကို ခရိုငျနှဈခုခှဲ၍ “ဝ” ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျးအဖွဈ သတျမှတျထားပွီး ဟိုပနျနှငျ့ မကျမနျးမွို့နယျမြားကို အစိုးရကထိနျးခြုပျ၍ အခွားမွို့နယျလေးခုကို “ဝ” ပွညျသှေးစညျးညီညှတျရေးပါတီ UWSA က ထိနျးခြုပျထားသညျ။
ရှမျးပွညျနယျ အရှပေို့ငျး “ဝ” ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရတိုငျး ဟိုပနျနှငျ့ မကျမနျးမဲဆန်ဒနယျမွတှေငျ “ဝ” အမြိုးသားပါတီ အနဖွေငျ့ အငျပွညျ့အားပွညျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈပွီး ကနျြမွို့နယျမြားဖွဈသညျ့ တနျ့ယနျး၊ ကြိုငျးတုံ၊ မိုငျးဆတျ၊ မိုငျးပဉျြး၊ မိုငျးယနျးတို့တှငျ ဝငျယှဉျပွိုငျသှားရနျစီစဉျထားသျောလညျး အတညျမပွုနိုငျသေးကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။“ဝ” တိုငျးတော့ နှဈမွို့နယျပဲရတော့ အပွညျ့အဝတော့ ပွိုငျသှားမယျ။ ကနျြတဲ့ ရှမျးပွညျနယျမှာရှိတဲ့ တနျ့ယနျး၊ ကြိုငျးတုံ၊ မိုငျးဆတျ၊ မိုငျးပဉျြး၊ မိုငျးယနျးတို့တော့ ပွိုငျဖို့ စဉျးစားထားတာ အတညျမပွုသေးဘူးလေ” ဟု ဦးဆမျးဆောငျကားက ပွော ကွားသညျ။“ဝ”အမြိုးသားပါတီကို ပွညျသူလူထု သဘောဆန်ဒအရ “ဝ”ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ “ဝ” အမြိုးသားစညျးလုံး ညီညှတျရေးပါတီနှငျ့ “ဝ”လဈဘရယျဒီမိုကရကျတဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ သုံးပါတီပေါငျးစညျး၍ တညျထောငျထားခွငျး ဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
“ပေါငျးတာ သိပျမကွာသေးဘူး။ ၂၆ ရကျလောကျက ပထမအကွိမျ ပါတီညီလာခံလုပျတာကို သကျဆိုငျရာပါတီဝငျအားလုံး မပေါငျးသေးဘူး။ ပေါငျးတော့မှအရအေတှကျအတိအကသြိရမယျ။ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှာ ၆၅၀ တငျ ထားတာရှိပါတယျ။ ပေါငျးရတဲ့အကွောငျးရငျးက လူထုဆန်ဒတောငျးဆိုမှုကွောငျ့ ပေါငျးတယျ။ လူထုမဲကိုတော့မြှျောလငျ့ တယျ။ လူထုတှေ အားပေးလိမျ့မယျ။ မဲပေးလိမျ့မယျ မြှျောလငျ့တာပဲ။ “ဝ”လေးမွို့ထဲမှာ မှတျပုံတငျမရှိတဲ့အတှကျ မဲထညျ့ လို့မရပါဘူး။ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျနဲ့ “ဝ”အဖှဲ့အစညျးမြားရဲ့ တာဝနျပေါ့”ဟု ဦးဆမျးဆောငျကားက ပွောကွားသညျ။
“အဓိကတော့ “ဝ” ပွညျနယျကို ပွညျထောငျစုဝငျ ပွညျနယျတဈခုအနနေဲ့ ပွနျလညျသတျမှတျပေးဖို့ အဓိကဦးတညျခကျြ ပေါ့။ ဒသေတှေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့၊ လူနမှေုအဆငျ့အတနျးမွငျ့မားဖို့ အခွားသော တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ တနျးတူအခှငျ့အရေးရဖို့ ရညျမှနျးခကျြတှပေဲလေ။ “ဝ” ပွညျနယျကို ပွညျထောငျစုဝငျ ပွညျနယျအဖွဈ သတျမှတျပေးဖို့ရနျ အဓိကထားပါတယျ”ဟု ဦးဆမျးဆောငျကားက ပွောကွားသညျ။“ဝ”အမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ၂၀၁၉ နှဈကုနျပိုငျးတှငျ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျ ပှဲကျောမရှငျ UEC ထံ ပါတီမှတျပုံတငျ လြှောကျထားခဲ့ပွီး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဧပွီတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမှတျပုံတငျရရှိခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။ https://news-eleven.com/article/181940
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ SNLD အနဖွေငျ့ မူဆယျခရိုငျအတှငျးရှိ မဲဆန်ဒနယျမွအေားလုံး၌ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားအား ဒသေခံ မြား၏ ဆန်ဒသဘောထားဖွငျ့ ရှေးခယျြမညျဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
“အခု ကြှနျတျောတို့မွို့နယျမှာက ပွညျနယျလှတျတျော နှဈနရောနဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျော တဈနရောရယျ၊ လိုအပျရငျလညျး ခရိုငျမှာ အမြိုးသားလှတျတျောနရော ဝငျပွိုငျဖို့ရှိပါတယျ။ စုစုပေါငျး လေးနရော ဝငျပွိုငျမှာပါ။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ယခငျ နိုငျခဲ့ပွီးသား ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲတုနျးက ပွညျသူ့လှတျတျောတဈနရောနဲ့ အမှတျ (၁) မဲဆန်ဒနယျတဈနရော နိုငျထားတာရှိ တယျ။ အဲဒီနရောနှဈခုက လကျရှိအနအေထားအရလညျး နိုငျမယျလို့ ခံယူထားတယျ။ ကနျြတဲ့ အမှတျ(၂) မဲဆန်ဒနယျနဲ့ ခရိုငျ မှာ အမြိုးသားလှတျတျောနရောမှာလညျး အနိုငျရရှိနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ထားတာရှိတယျ”ဟု မူဆယျမွို့နယျ ရှမျးတိုငျးရငျး သားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ စိုငျးလှဖကေ ပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျ၍ ၎င်းငျးက “ဒခေံတှကေို ပွောခငျြတာက အမြိုးသားရေးအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ပငျလုံရဲ့ ကတိကဝတျတှအေရ ကြှနျတျော တို့ ပွညျနယျမှာ ပွညျထောငျစုမှာ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုပုံစံမြိုး ပျေါပေါကျလာအောငျ ကြှနျတျောတို့ ဦးတညျရညျမှနျးထား ပါတယျ။ ဒါကိုလညျး အားလုံးအကောငျအထညျဖျောနိုငျ‌အောငျ အားသှနျခှနျစိုကျလုပျသှားပါမယျ။ နောကျတဈခုက ဒသေ နယျမွမှောရှိတဲ့ ဒသေပွညျသူတှအေားလုံးအတှကျ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေး၊ လုံခွုံရေးအပိုငျးကစပွီးတော့ အားလုံးကို အကာ အကှယျပေးနိုငျအောငျ ဦးစားပေးလုပျဆောငျသှားမယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။
မူဆယျခရိုငျအတှငျးရှိ မဲဆန်ဒနယျမွအေားလုံးတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ SNLD ပါတီ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဇူလိုငျ ၁၂ ရကျတှငျ ဒသေခံပွညျသူမြား၏ ဆန်ဒသဘောထားဖွငျ့ ရှေးခယျြမညျဖွဈပွီး မွို့နယျမှ စိစဈအတညျပွုပွီးပါက ဗဟိုသို့ ဆကျလကျပေးပို့သှားမညျဖွဈကွောငျး စိုငျးလှဖကေ ဆိုသညျ။ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (Shan Nationalities League for Democracy- SNLD) ကို ၁၉၈၈ ခုနှဈ အောကျတိုဘာ ၂၆ ရကျတှငျ စတငျတညျထောငျခဲ့သညျ။ https://news-eleven.com /article/181774
တိုငျးရငျးသားမဟာမိတျအဖှဲ့ဖွဈသညျ့ UNA အဖှဲ့ဝငျ ပါတီအခငျြးခငျြး ရှေးကောကျပှဲ မဲဆန်ဒနယျတူညီလြှငျ အားသာခကျြရှိ သညျ့ ပါတီအနိုငျရရေး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျသှားမညျဟု အဖှဲ့ဝငျ ပါတီအခြို့၏ တာဝနျရှိသူမြားက ပွောကွားသညျ။
ရှေးကောကျပှဲ မဲဆန်ဒနယျတူ၍ ပါတီတဈခု ရှောငျပေးခွငျးက ပါတီပုံရိပျထိခိုကျနိုငျသလို လူထုဆန်ဒကိုလညျး မလေးစားရာ ရောကျစသေညျဟု UNA အဖှဲ့ဝငျ ရှမျးတိုငျး ရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးစိုငျးလိတျ က ပွောကွားသညျ။“အဖှဲ့ဝငျပါတီ အနိုငျရဖို့တော့ အကုနျလုံး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွမှာပေါ့”ဟု UNA ပွောခှငျ့ရ ပုဂ်ဂိုလျ တဈဦးဖွဈသညျ့ ဦးစိုငျးလိတျက ပွောကွားသညျ။
စညျးလုံးညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားမဟာမိတျ(UNA) ကို နိုငျငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပွီး ၁၂ ပါတီမှာ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားဖွဈကာ ကနျြတဈပါတီမှာ ၁၉၉၀ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားအဖှဲ့ကို အခွခေံတညျထောငျသညျ့ ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားဒီမိုကရစေီပါတီ (UNDP) ဖွဈသညျ။
SNLD ပါတီအနဖွေငျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ရှမျးပွညျနယျရှိ မဲဆန်ဒနယျအမြားစုနှငျ့ ကခငျြပွညျနယျ၊ ကယား ပွညျနယျ၊ မန်တလေးတိုငျးရှိ မဲဆန်ဒနယျအခြို့တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။ ယငျးသို့ ယှဉျပွိုငျရာတှငျ ကခငျြပွညျ နယျ နှငျ့ ကယားပွညျနယျရှိ မဲဆန်ဒနယျအခြို့တှငျ UNA အဖှဲ့ဝငျ ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျပါတီ (KNC) နှငျ့ ကယနျးအမြိုးသား ပါတီ (KNP) တို့နှငျ့ မဲဆန်ဒနယျထပျခွငျးမြား ရှိနိုငျသျောလညျး အခငျြးခငျြးနားလညျမှုရှိ၍ ဆိုးရှားသညျ့ပှတျတိုကျမှု မရှိနိုငျဟု ဦးစိုငျးလိတျက ဆိုသညျ။ လကျရှိတှငျ UNA အဖှဲ့ဝငျအခြို့ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ အစီအစဉျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပါတီခငျြးညှိနှိုငျးမှုမြား စတငျလုပျဆောငျနသေညျကို တှရေ့သညျဟု UNA အဖှဲ့ဝငျ ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (ALD) အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးမြိုးကြျောက ပွောကွားသညျ။ ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီအနဖွေငျ့လညျး လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ရခိုငျပွညျနယျအပါအဝငျ ရနျကုနျတိုငျးနှငျ့ ဧရာဝတီ တိုငျးရှိ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး နရောမြား ကိုလညျး ယှဉျပွိုငျမညျဟုသိရသညျ။ အခွားသော UNA အဖှဲ့ဝငျ တိုငျးရငျး သားနိုငျငံရေးပါတီမြားလညျး ၎င်းငျးတို့ပါတီ တညျရှိ ရာဒသေမြားတှငျ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲယှဉျပွိုငျရနျ ပွငျဆငျမှုမြား လုပျဆောငျနကွေောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/182054
တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာ ပွတျလပျနကွေသညျ့ ရခိုငျပွညျနယျ အမျးမွို့နယျ ဒါးလကျအုပျစုရှိ ဒသေခံပွညျသူမြား အတှကျ ဆနျအိတျမြား သယျယူရာတှငျ အုပျခြုပျရေးမှူး၏ ထောကျခံခကျြယူ၍ ပို့ဆောငျနိုငျကွောငျး သိရသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ဇှနျလ၂၈ ရကျက ဒါးလကျအုပျစုရှိ ဒသေခံပွညျသူ ၄၀ဝဝ ကြျောအတှကျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ခငျြးတက်ကသိုလျ ကြောငျး သား/သူမြားအဖှဲ့ (CUSR) မှ ဦးစီးပွီး ဆနျ ၁၂၅ အိတျကို သယျဆောငျလာရာ ကဇူးကိုငျး တံတားအနီးတှငျ ယာယီ တပျ စခနျးခနြကွေသညျ့ တပျမတျောက အိတျ၂၀ သာ ခှငျ့ပွုခဲ့ကွောငျး CUSR မှ ပွောဆိုသညျ။
ထိုဖွဈရပျနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဆနျအိတျသယျယူရာတှငျ အုပျခြုပျရေးမှူးထံမှ ထောကျခံခကျြပါရမညျဖွဈကွောငျး၊ ထောကျခံ ခကျြမပါသဖွငျ့ တပျမတျောက ဆနျသယျယူခှငျ့ ပိတျပငျတားဆီးခဲ့ခွငျးသာဖွဈကွောငျး အမျးမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကိုကိုမွတျက ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
“အဲဒီလို သယျလို့တားတယျဆိုတာ တခါမှမကွားဖူးဘူး။ အမျးမွို့နယျ လုံခွုံရေး အတှကျဆို တပျတှေ ရှိတယျ။ ကနြျော့ဆီ က ထောကျခံခကျြပါရငျ အကုနျလုံးက လှတျပေးတယျ။ တခါမှ ပိတျတယျ ပွုတယျ မကွားမိဘူး။ သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ ဆနျသယျသှားတယျဆိုတာ ဘာအကွောငျးကွောငျ့လဲတော့ မသိဘူးလေ။ အဲဒီလူတှကေ ဘာအတှကျ သယျတာလဲ။ ဘယျသူက သယျတာလဲ။ အဲဒါတှလေညျး လိုသေးတယျ။ သူတို့ပွောသလို ပိတျတယျဆို တာက မဖွဈနိုငျဘူးလေ”ဟု ပွောသညျ။ ဆနျသယျယူရာတှငျ ဒသေခံမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးသယျယူမညျ ဖွဈသောကွောငျ့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးထံသို့ စာမတငျမေိ ကွာငျး CUSR မှ ဥက်ကဋ်ဌ ဆလိုငျးထှနျးလှကြျောက ဆိုသညျ။ ဆလိုငျးထှနျးလှကြျောက “ပို့မှာကတော့ အမျးမွို့နယျ၊ CUSR ဆပျကျောမတီနဲ့ ဒသေခံတှပေေါငျးပွီး ဆနျကို သယျသှား ကွမလို့။ ဒါပမေယျ့ ကဇူးကိုငျး အနီးမှာရှိတဲ့ တပျနဲ့ ညှိကွညျ့ကွ တော့ တပျက လောလောဆယျ ဆနျကိုအမြားကွီး သယျခှငျ့ မပေးနိုငျသေးဘူးလို့ ပွောတယျ။ သယျမယျဆို တလကို ဆနျအိတျ၂၀ ပဲ သယျခှငျ့ ပေးမယျလို့ ပွောတယျ။ တကယျလို့ လုံးဝ အဆငျမပွကွေဘူဆိုရငျလညျး ခငျဗြားတို့ အဆငျပွတေဲ့ နရောတှကေို ပွောငျးကွပါလို့ပဲ ပွောတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ စဈတပျ(AA)တို့၏ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ရလေမျးကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလတှငျ ပိတျထားခဲ့ပွီး ကုနျးလမျးကို ၂၀၂၀ ဖဖေျောဝါရီလတှငျ ထပျမံ ပိတျလိုကျခွငျးကွောငျ့ အမျးမွို့နယျရှိ ဒါးလကျအုပျစုတခုလုံး စားနပျရိက်ခာမြား ပွတျလပျသှားခွငျး ဖွဈသညျ။ ဒါးလကျ အုပျစုတှငျ ကြေးရှာပေါငျး ၄၇ ရှာ ရှိသညျ့အနကျ ၇ ရှာက ရခိုငျ လူမြိုးမြား နထေိုငျသညျ့ ရှာမြားဖွဈပွီး ကနျြသညျ့ ရှာပေါငျး ၄၀ မှာ ခငျြးလူမြိုးမြား နထေိုငျသညျ့ ရှာမြားဖွဈကာ လူဦးရေ စုစု ပေါငျး ၁ သောငျး ၃ ထောငျကြျော ရှိသညျဟု ဒါးလကျ အုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူးထံက သိရသညျ။ ဒါးလကျအုပျစုက အုပျခြုပျ ရေးမှူးတခြို့လညျး နှဈဖကျတပျကိုကွောကျနရေသညျ့အတှကျ ထှကျပွေးနကွေရသညျဟု ဒါးလကျအုပျစုအတှငျးရှိ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးတဦးထံက သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/07/225881.html
၁၂။ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ဟုဆိုကာ ဝဘေူလတောငျတှငျ ကုမ်ပဏီတဈခုက သတ်တုတူးဖျောရေး ဆောငျရှကျ နေ
ခငျြးပွညျနယျ ဖလမျးခရိုငျ ဆီးယငျးသဈတောကွိုးဝိုငျးဧရိယာအတှငျး တညျရှိသညျ့ ဝဘေူလတောငျတှငျ ဖိုးလမငျးသာသာ ကုမ်ပဏီက ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ဟုဆိုကာ သတ်တုတူးဖျောမှုဆောငျရှကျနသေညျဟု စုံစမျးသိရှိသညျ။
ဝဘေူလတောငျသညျ ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး နယျနိမိတျအနီးတှငျတညျရှိပွီး ကုမ်ပဏီတာဝနျရှိသူမြားက လုပျငနျးအကောငျအထညျဖျောသညျ့အနဖွေငျ့ လမျးဖောကျလုပျခွငျး၊ အဆောကျအဦးတညျဆောကျခွငျးမြားရှိလာသညျ့ အတှကျ စဈကိုငျးတိုငျးဘကျမှ ကြေးရှာတဈခြို့က ကနျ့ကှကျမှုရှိလာသညျ့အတှကျ ယနတှေ့ငျ ကလေးမွို့နယျအုပျခြုပျရေး တာဝနျရှိသူမြား၊ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားက သှားရောကျကှငျးဆငျး စဈဆေးမှုပွုလုပျခဲ့ကွသညျဟု အထကျခငျြးတှငျ လူငယျမြား ကှနျယကျ ဦးကြျောသကျဝငျးကပွောသညျ။“ဒသေခံတှကေနျ့ကှကျတဲ့အခါကမြှ စဈကိုငျးတိုငျးဘကျကသိတယျ ဒီဧရိယာက ဆီးယငျးကွိုးဝိုငျးထဲမှာပါနတေယျ၊ အဲဒီမှာ လုပျကှကျပေါငျး (၁၄) ခုခထြားတယျ အခုတော့ ပွညျနယျအစိုးရ သ ဘောထားမှတျခကျြနဲ့ ကနြျောတို့သိထားတာက လုပျကှကျ (၄) ခုလောကျကတော့ ပွညျနယျအစိုးရ သဘောထား မှတျခကျြ ပေးပွီးပွီသိရတယျ၊ ဘာတှမှေတျခကျြပေးတာလဲတော့မသိရဘူး ဒါပမေဲ့ စဈကိုငျးဘကျက ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး လကျမခံဘူး၊ ကုမ်ပဏီဘကျကတော့ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရက သဘောထားမှတျခကျြပေးတဲ့အတှကျ သူတို့ဆောကျတာလို့ပွောတယျ၊ အဲဒါ ကနြျောတို့က ခှငျ့ပွုခကျြအမိနျ့တှပွေပေါ့ တောငျးတာပေါ့ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရခှငျ့ပွုတယျဆိုရငျ စဈကိုငျးတိုငျးအစိုးရ ခှငျ့ပွု တယျဆိုရငျ သကျဆိုငျတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှပွေဆိုတော့ သူတို့မပွနိုငျဘူး၊ အဲဒီအတှကျကွောငျ့ ကနြျောတို့ အခုဆောကျ ထားတဲ့ အဆောကျအဦးတှဖေယျြရှားပေးဖို့နဲ့ ဖကျြသိမျးပေးဖို့ ကနြျောတို့ ဒီနမှေ့တျခကျြပွုတယျ”ဟု ဦးကြျောသကျဝငျး က ပွောသညျ။
ဖိုးလမငျးသာသာ ကုမ်ပဏီအနဖွေငျ့ အဆိုပါဝဘေူလတောငျတှငျ ခရိုမိုကျတူးဖျောရေးလုပျငနျးဆောငျရှကျပါက တောငျခွရှေိ စဈကိုငျးတိုငျးဘကျခွမျးမှ လယျယာမွအေမွာကျအမြား ပကျြစီးဆုံးရှုံးနိုငျသညျဟုဆိုကာ ကြေးရှာအုပျစု (၃) အုပျစု ငါးဖားအုပျ စု၊ နတျခြောငျးအုပျစုနှငျ့ ထောကျကွံ့အုပျစုတို့မှ ကနျ့ကှကျခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။
“ကနြျောပွောမယျ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရက ဘယျသတ်တုလုပျငနျးမှ ခှငျ့ပွုထားတာမရှိသေးဘူး၊ နောကျတဈခုက ခငျြး ပွညျနယျအစိုးရ သတ်တုလုပျကှကျစီစဈရေးက အသေးစားနဲ့ လကျလုပျလကျစားပဲ ခှငျ့ပွုခကျြပေးလို့ရတယျ၊ အကွီးစားကို ပွညျထောငျစုအဆငျ့ပဲဆိုငျပါတယျ၊ ခငျြးပွညျနယျက လုပျကှကျခထြားပေးနိုငျတဲ့နရောမှာ ဗဟိုကသတျမှတျထားတာ ပွညျထောငျစုကသတျမှတျထားတာ၊ ဆိုတော့ နံပတျတဈက ကနြျောတို့ခထြားတာမရှိပါဘူး နံပတျနှဈက ခငျြးပွညျနယျက ခထြားပေးတယျဆိုရငျ စာရှကျစာတမျးတောငျးပါ ခှငျ့ပွုခကျြစာရှကျစာတမျးတောငျးပါ၊ အဲဒါတော့ ကနြျောတို့က ကနြျောတို့ ဆီရောကျလာရငျ အစဈလားအတုလား ခှဲပေးမယျ၊ တကယျလို့ အတုနဲ့လုပျမယျဆိုရငျ စီးပှားရေးသမားတှကေ လုပျငနျးရှငျ တှကေ ဒါဥပဒမေဲ့လုပျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒါကိုလညျး ဥပဒအေရအရေးယူလို့ရတယျ”ဟု ခငျြးပွညျနယျသဈတောရေးရာ ဝနျကွီး ဦးမာနျဟငျးဒါလျကပွောသညျ။ ခငျြးပွညျနယျတှငျ ခရိုမိုကျသတ်တုသညျ ဖလမျးခိုငျ တီးတိနျ၊ တှနျးဇံမွို့နယျ မွှတောငျ ဖားတောငျတှငျ အမြားဆုံးထှကျရှိပွီး ဒုတိယမှာ ဖလမျးမွို့နယျ ဆီးယငျးသဈတျောကွိုးဝိုငျးဒသေ ဝဘေူလတောငျဟု သိရ သညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-7
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျ ပနျကိုငျကြေးရှာအုပျစု နမျ့ခှမျရှာတှငျ ပေါကျကှဲမှုတခုဖွဈပွီး ဒသေခံ ၇ ဦး ထိမှနျခဲ့ ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ဇူလိုငျ ၈ ရကျ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီဝနျးကငျြက နမျ့ခှမျရှာရှိ တောငျယာတှငျ အမြိုးသား ၂ ဦး နှငျ့ အမြိုးသမီး ၅ ဦး အလုပျလုပျနစေဉျ ပေါကျကှဲမှုတခုဖွဈပှားကာ ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိခဲ့ကွောငျး မတ်ေတာရှငျလူမှုကူညီရေးအသငျး နာယက က သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။“မွမွှေုပျမိုငျးတော့မဟုတျဘူး။ သူတို့တောငျယာလုပျရငျး နားနခြေိနျမှာ မပေါကျကှဲသေး တဲ့ မိုငျးကို သှားထိမိလို့ ပေါကျကှဲတာ။ ဒဏျရာ ပွငျးထနျတဲ့ ၅ ဦးကိုတော့ လားရှိုးပွညျသူ့ဆေးရုံကို ပို့ထားတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
ဒဏျရာ ပွငျးထနျသညျ့ အမြိုးသား ၁ ဦး နှငျ့ အမြိုးသမီး ၄ ဦးကို ယမနျနတှေ့ငျ ဂရုဏာလူမှု ကူညီရေးအသငျး နှငျ့ မတ်ေတာရှငျ လူမှုကူညီရေးအသငျးတို့က လားရှိုးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ထိုဒသေတလြှောကျတှငျ အစိုးရ တပျမတျော၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျမြား လှုပျရှားနသေဖွငျ့ မပေါကျကှဲသေးသညျ့ ကညျြမြား ဆကျရှိနိုငျဦးမညျဖွဈ ကွောငျး သှားရောကျကူညီခဲ့သညျ့ မတ်ေတာရှငျ လူမှုကူညီရေး အသငျး က ပွောဆိုလိုကျသညျ။
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး အစိုးရတပျမတျော နှငျ့ ကခငျြလှတျမွောကျရေးတပျမတျော (KIA)၊ တအာငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားလှတျမွောကျရေး တပျမတျော (TNLA)တို့ မကွာခဏ ထိတှသေ့ညျ့နရောဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ ယခုရကျပိုငျး အစိုးရတပျမတျောသညျ စဈအငျအားဖွညျ့ဆညျးမှုမြား ပွုလုပျကာ ဒသေခံမြား စိုးရိမျထိတျလနျ့မှုဖွဈနကွေောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17427
၁၄။ သတ်တမတနျး သငျရိုးညှနျးတမျးအသဈမှာ ကယား(ကရငျနီ)မြိုးနှယျစုအမညျတခြို့ စာလုံးပေါငျးသတျပုံနှငျ့ ရိုးရာဓလေ့ အကွောငျးမှားနေ
သတ်တမတနျး သငျရိုးညှနျးတမျးအသဈမှာ ကယား(ကရငျနီ)ပွညျနယျက တိုငျးရငျးသားအမညျနာမနဲ့ ရိုးရာဓလအေ့ကွောငျး တှေ မှားနတေယျလို့ သကျဆိုငျရာ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုတှကေ ထောကျပွ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
ကယား(ကရငျနီ)လူမြိုးတှရေဲ့ အထှတျအထိပျထားတဲ့ အဲဒိုပျေါမီပှဲ (ချေါ) ဒီးကူပှဲကို ဒီကူးပှဲလို့သာ ဖျောပွထားခွငျး၊ ဒီးကူကို ဒီကူးဟု စာလုံးပေါငျးမှားယှငျးစှာ ရေးသားထားခွငျးနှငျ့ ၎င်းငျးပှဲတျောကိုလညျး ကောကျသဈစားပှဲလို့ ဆရာကိုငျစာအုပျမှာ ဖျောပွထားခွငျးက လှဲမှားနတေယျလို့ ကယားစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုကျောမတီဥက်ကဌ ခူးဖဲညှနျ့ရယျက ပွောပါတယျ။ ယခငျ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုနှဈက ကယားတဈမြိုးသားလုံးညီလာခံမှာလညျး ဒီးကူပှဲအစား အဲဒိုပျေါမီပှဲလို့သာ အသုံးပွုကွဖို့ အတညျပွု ခကျြယူပွီးသားဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။“ဒါပမေယျ့ အလှယျတကူသုံးနှုနျးခငျြနတေဲ့ဒီ တခွားသော တိုငျးရငျးသားတှကေ ဒီးကူဆိုတဲ့ဟာကို သုံးနှုနျးနကွေတယျ။ အခု ဒီအဲဒိုပျေါမီရဲ့ အသုံးအနှုနျးကို ပွနျပွီးတော့ အသုံးပွုနိုငျဖို့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ တုနျးက ထေးငှားလြား တဈပွညျနယျလုံးဆိုငျရာ အဲဒိုပျေါမီလို့ ကနြျောတို့ ပွနျလညျပွီးတော့ အတညျပွုခမြှတျပွီးသားဖွဈပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ပွညျသူလူထုတှကွေားမှာဆိုရငျ အဲဒိုပျေါမီလို့ တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုနပေါတယျ။”ကြောငျး သားကိုငျစာအုပျ စာမကျြနှာ ၃၁-၃၂ ထဲတှငျလညျး အဲဒိုပျေါမီပှဲတျောသညျ ကောကျညငျးထုတျပှဲတဈခု ဖွဈကွောငျးကိုလညျး ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားမြား၏ သဘောထားနှငျ့မကိုကျညီပဲ ခတျေအဆကျဆကျကအမှားတှကေို တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ ကလေးတှကေိုသငျကွားမညျဆိုပါကတိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြးကွားမှာ သှေးခှဲမှုမြားဖွဈပျေါစတေယျလို့ ကိုကြျောထငျအောငျ က ပွောပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကယနျးဆိုတဲ့ စာလုံးပေါငျးသတျပုံကို ယနျးကို (ယမျး)လို့ သုံးထားခွငျး၊ ဂဘေားဆိုတဲ့ စာလုံး ပေါငျးသတျပုံလညျး ဘားကို (ပါး)အဖွဈသုံးထားခွငျး အပွငျ ကယားမြိုးနှယျစု ၉ မြိုးထဲက ဇယိမျး၊ ဂခေို၊ ကယနျး(ပဒေါငျး)၊ ယငျးဘျော ဆိုတဲ့ မြိုးနှယျစု လေးစုက ကယနျးမြိုးနှယျစု တဈခုတညျးသာဖွဈတဲ့အတှကျ လေးခုလုံးဖျောပွခွငျးက မှားနေ တယျလို LAIN နညျးပညာအထောကျအကူပွုအဖှဲ့ ဘုတျအဖှဲ့ရဲ့ ဥက်ကဌ ကိုကြျောထငျအောငျ ကထောကျပွပွောဆိုပါတယျ။ ကယနျးမြိုးနှယျစု လေးမြိုးရဲ့ အချေါအဝျေါကိုလညျးမှာလညျး ဇယိမျး=ကယနျး(လထ)၊ ကယနျး(ပဒေါငျ)=ကယနျး(လဝီ)၊ ဂခေို=ကယနျး(ဂခေို)၊ ယငျးဘျော=ကယနျး(ကငနျ) စသညျဖွငျ့ ပွောငျလဲချေါဆိုခဲ့ကွကွောငျးကို ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျသာ အတညျပွုလကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွပွီး အားလုံးကို ကယနျးမြိုးနှယျစုတဈခုသာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ယခုလို ကြောငျးသုံးစာအုပျထဲမှာ မှားယှငျးဖျောပွထားခွငျးမှာ အစိုးရပညာရေးဝနျကွီးဌာနမြားမှ တိုငျးရငျးသားရေးရာဌာန မြားနှငျ့ တိုငျးရငျးသားစာပရေုံးမြားသို့ ကှငျးဆငျးလလေ့ာမှုအားနညျးခဲ့ခွငျးကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ ကယနျးစာပယေဉျကြေးမှု ကျောမတီ ယဉျကြေးမှုတာဝနျခံ ဒျေါရငျမေ က ထောကျပွပွောဆိုသှားပါတယျ။ ကယား(ကရငျနီ) ပွညျနယျရှိ ဆရာ/မ မြား နှငျ့ ကြောငျးသား/သူမြားသညျ တိုငျးရငျးသားဒသေခံဖွဈ၍ သငျကွားရာတှငျ အမှနျကိုသငျကွားပေး နိုငျသျောလညျး တဈခွား တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျမြားမှာ စာလုံးပေါငျးအမှနျကိုမသိသောကွောငျ့ အမှားအတိုငျးသငျကွားသှားနိုငျပွီး နောငျလာနောငျသား မြားအတှကျ မကောငျးဘူးလို့ ကကေောကြေးရှာ အလယျတနျးပွ ဆရာမ ဒျေါယှာအယျဖောက ဆိုပါတယျ။ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုမြား၏ အသုံးအနှုနျးအချေါအဝျေါမြားကို အတှငျးကလြလေ့ာသငျ့ပွီး ယခုလို တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြား၏ အကွောငျး မြားကို မှားယှငျးစှာဖျောပွခွငျးမှာ ကယားပွညျနယျတဈပွညျနယျတညျးမဟုတျပဲ တဈခွားပွညျနယျရှိ တိုငျးရငျးသားမြား၏ အကွောငျးအရာတဈခြို့လညျး မှားယှငျးနတေယျလို့သိရပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/ news-74113
အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ ထုတျပွနျသညျ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး မဲဆန်ဒနယျ မြားတှငျ ကယားပွညျနယျ၌ ဗမာတိုငျးရငျးသားလူမြိုး မဲဆန်ဒနယျသာပါဝငျပွီး ကယနျးတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမဲဆန်ဒနယျ (ကယနျး တိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး) အား ထညျ့သှငျးသတျမှတျပေးရနျ ကယနျးအမြိုးသား ညီညှတျရေးဦးဆောငျ ကျောမတီ က ဇူလိုငျ ၃ ရကျတှငျ သဘောထားထုတျပွနျ တောငျးဆိုသညျ။
ကယနျးအမြိုးသားညီညှတျရေးကျောမတီတှငျ ကယနျးပွညျသဈပါတီ၊ ကယနျး အမြိုးသားပါတီ၊ ကယနျးစာပနှေငျ့ ယဉျကြေး မှုကျောမတီ၊ ကယနျးအမြိုးသမီး အစညျးအရုံး၊ ကယနျးမြိုးဆကျသဈလူငယျအဖှဲ့တို့ ပါဝငျသညျ။ ကယားပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၄ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးစောစိနျထှနျးမှ လှတျတျောတှငျ မေးမွနျးခဲ့သဖွငျ့ အမြိုးသားလှတျတျောရုံး သုတသေနဌာန ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးနှငျ့ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေးဌာနကွီးမှ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၂ ရကျတှငျ ပွနျလညျ ပေးပို့သညျ့စာအရ ကယားပွညျနယျတှငျ ကယနျးလူဦးရေ ၆၉၉၁၀ ဦး ရှိကွောငျး သိရှိခဲ့ရသညျဟု ကယနျးအမြိုးသား ညီညှတျရေးကျောမတီ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပွေဋ်ဌာနျးခကျြအရ ကယနျးလူမြိုးမြား သညျ ကယားပွညျနယျတှငျ မွနျမာနိုငျငံလူဦးရေ၏ ဝ ဒသမ ၁ ရာနှုနျးကြျောရှိသညျ့အတှကျ ကယနျးတိုငျးရငျးသားရေးရာ ဝနျကွီးတဈဦး ရရှိရမညျဖွဈသျောလညျး လကျရှိရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျမှ ထုတျပွနျသော ကယားပွညျနယျ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမဲဆန်ဒနယျတှငျ ကယနျးတိုငျးရငျးသား လူမြိုးရေးရာဝနျကွီး မဲဆန်ဒနယျ သတျမှတျထညျ့သှငျးခွငျးမရှိကွောငျး ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ပါရှိသညျ။
၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ ၁၆၁၊ ပုဒျမခှဲ (ခ) ၌ တိုငျးဒသေကွီးမြားတှငျ ထိုတိုငျးဒသေကွီးရရှိပွီးသော သို့မဟုတျ ထို တိုငျးဒသေကွီးအတှငျး ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ စီရငျစုရရှိပွီးသော တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားမှအပ ကနျြတိုငျးရငျးသား လူမြိုး မြားအနကျ လြျောကနျသငျ့မွတျသော လူဦးရဖွေဈသညျ့ နိုငျငံတျောရှိလူဦးရေ စုစုပေါငျး၏ ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့အထကျ ရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာက သတျမှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးအသီးသီးက လူမြိုးတဈမြိုးလြှငျ တဈဦးကစြီ ရှေးကောကျ တငျမွှောကျသညျ့ တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားဟုလညျးကောငျး၊ ပုဒျမ ခှဲ (ဂ) ၌ ပွညျနယျမြားတှငျ ထိုပွညျနယျရရှိပွီးသော သို့မဟုတျ ထိုပွညျနယျအတှငျး ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရစီရငျစုရရှိပွီးသော တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားမှ အပ ကနျြတိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားအနကျ လြျောကနျသငျ့မွတျသော လူဦးရဖွေဈသညျ့ နိုငျငံတျောရှိ လူဦးရေ စုစုပေါငျး ၏ ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့အထကျရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာက သတျမှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုး အသီးသီးက လူမြိုးတဈမြိုး လြှငျ တဈဦးကစြီ ရှေးကောကျတငျမွှောကျသညျ့ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားဟု ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။ ကယား ပွညျနယျတှငျ ကယနျးတိုငျးရငျးသားမြားမှာ ပထမအမြားဆုံးဖွဈသညျ့ ကယားမြိုးနှယျစုပွီးနောကျ ဒုတိယအမြားဆုံး နထေိုငျ ကွသော မြိုးနှယျစုမြားဖွဈပွီး ခတျေအဆကျအဆကျ နိုငျငံရေးလှုပျရှားမှုမြားတှငျ ရှတေ့နျးမှပါဝငျခဲ့ကွသော သမိုငျးကွောငျး မြား ရှိသညျဟု သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/181317
ကရငျလူငယျမြားအနဖွေငျ့ မတူညီသောနယျပယျဒသေအသီးသီး၊ ကဏ်ဍအသီးသီးမြားမှတဆငျ့ တူညီသော ဘုံရညျမှနျးခကျြ မြားဖွငျ့ ကရငျအမြိုးသားရေးပနျးတိုငျနှငျ့ နိုငျငံတညျဆောကျမှုလုပျငနျးမြားတှငျ ပါဝငျလာနိုငျရေးအတှကျ ရညျရှယျရေးဆှဲနေ သညျ့ ကရငျလူငယျမဟာဗြူဟာရေးဆှဲလုပျငနျးစဉျမှ မူကွမျး တဈခုထှကျရှိ လာတော့မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကရငျ လူငယျထုတဈရပျလုံးနှငျ့သကျဆိုငျသညျ့ မဟာဗြူဟာမူကွမျးရေးဆှဲနိုငျရေးအတှကျ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပ၊ နယျစပျရှိ ကရငျလူငယျအဖှဲ့အစညျးအသီသီးမှ ကရငျလူငယျမြားပါဝငျသညျ့ မူကွမျးရေးဆှဲရေးကျောမတီဖှဲ့ စညျးကာ အကောငျအထညျ ဖျောဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုသို့အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျမှုမြား၏ နောကျဆကျတှဲအနဖွေငျ့ မူကွမျးရေးဆှဲ ရေး ကျောမတီမှ ယခု ဇူလိုငျ ၃ ရကျ မှ ၉ ရကျနအေ့ထိ ရနျကုနျတှငျ မူကွမျးရေးဆှဲရေးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အစညျးအဝေး တဈခုပွုလုပျခဲ့ပွီးနောကျ အဆိုပါမူကွမျးတဈခု ထှကျရှိလာမညျလညျးဖွဈသညျ။ ကရငျလူငယျမဟာဗြူဟာရေးဆှဲရေး ဦးဆောငျစညျးရုံးရေးအဖှဲ့မှ စောထှနျးထှနျး က “ ဒီဟာက ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ စကျတငျ ဘာလ မဲဆောကျမှာ ကရငျလူငယျတှေ တှဆေုံ့ပွီး ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့ ပှဲရဲ့နောကျဆကျတှဲ ပေါ့။ ဒါကိုမဟာ ဗြူဟာရေး ဆှဲရေးမူ ကွမျးအဖှဲ့ကနရေေးဆှဲနတော၊ အခု Zero Draft စပွီးဆှဲတဲ့အခြိနျပေါ့။ အခု ဒီ ၅ ရကျ ၆ ရကျပွီးသှားရငျတော့ ကရငျ လူငယျမဟာဗြူဟာ Zero Draft ထှကျလာမယျ။ Final Draft ကတော့ဒီ လထဲထပျထှကျလာဖို့ ရှိတယျ”ဟု ပွောသညျ။
ကရငျလူငယျမဟာဗြူဟာမူကွမျးတှငျ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ ပညာရေး၊ အခှငျ့အရေး၊ ရိုးရာယဉျကြေးမှု၊ စာပေ၊ ဘာသာ စကားစသညျ့ ကဏ်ဍပေါငျး ၁၈ ခုပါဝငျမညျဖွဈပွီး မူကွမျးရေးဆှဲရေးကျောမတီထဲတှငျပါဝငျသူမြားမှ ၎င်းငျးတို့တာဝနျယူထား သညျ့ ကဏ်ဍအသီးသီးမြားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အခကျြအလကျမြား ကောကျယူစုဆောငျးကာ ရေးဆှဲခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျဟု မူကွမျးရေးဆှဲရေးကျောမတီထံမှ သိရသညျ။ မကွာမီထှကျရှိလာမညျ့ အဆိုပါမူကွမျးမြားကို သကျဆိုငျရာအခနျးကဏ်ဍ အသီး သီးမြားမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ အကွံ ပေးကျော မတီမြားထံပေးပို့မညျဖွဈပွီး ထို့မှတဆငျ့ရရှိလာသညျ့အခြောသတျမူကွမျးမြားကို ကရငျလူငယျနှီး နှောဖလှယျပှဲ၊ KYO ကှနျ ဂရကျ၊ ထိုမှတဈဆငျ့ KNU ကှနျဂရကျမြားထံတငျပွပွီးမှ အဆငျ့ဆငျ့ အတညျပွု ရရှိထားသညျ့ လုပျငနျးစဉျမြားအတိုငျး ကရငျလူငယျမြားအနဖွေငျ့ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျ သှားကွမညျဖွဈသညျ ဟု သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/07/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
မှနျပွညျနယျ ကြိုကျမရောမွို့နယျ ပြားတောငျကိုအခွပွေု၍ လညျပတျလြှကျရှိသော Mawlamyine Cement Limited MCL ဘိလပျမွစေကျရုံသညျ လာမညျ့ ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျနတှေ့ငျ ရပျနားသှားတော့မညျ့ သတငျးထှကျပျေါနသေောကွောငျ့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား ၁၅၀ဝ ကြျော အလုပျလကျမဲ့ကွုံတှရေ့မညျ့အရေးကို စိုးရိမျနကွေသညျဟု ဆိုသညျ။
MCL စကျရုံသညျ ထိုငျးနိုငျငံ SCG-Siam Cement Group-SCG နှငျ့ မွနျမာဘကျက Pacific Link Cement Industries-PLCI တို့ ဖကျစပျလုပျကိုငျလြှကျရှိပွီး ရှယျယာကိစ်စပွဿနာရှိသောကွောငျ့ စကျရုံရပျဆိုငျးတော့မညျ့အခွအေနကေို စကျရုံ ဝနျထမျးအခြို့ထံမှ ကွားသိရပါသျောလညျး စကျရုံတာဝနျရှိပုဂ်ဂိုလျမြားအား အတညျမပွုနိုငျခွငျး မရှိသေးပေ။ MCL တှငျ အလုပျလုပျကိုငျနသေော ကိုစိုးဝငျး က “တကယျလို့ စကျရုံရပျသှားမယျဆိုရငျ နောကျအလုပျရှာဖို့လဲမလှယျဘူး။ အခုကာလ ကလဲ ကိုဗဈ ၁၉ ကာလလညျးဖွဈနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ ဘယျစကျရုံမှလဲ အလုပျသမားအသဈမခနျ့တဲ့အတှကျ ကြှနျတျော တို့မှာတော့ အခကျခဲဖွဈတာပေါ့။ ကြှနျတျောတို့လဲ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားဖွဈနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ မိသားစုအတှကျ ဘယျလိုမှထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ အနအေထားတော့မရှိနိုငျဘူးပေါ့” ဟု မှနျသတငျးအဂေငျြစီကို ပွောသညျ။
စကျရုံရပျနားသညျ့အခါ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈသှားမညျ့ အလုပျသမား ၁၅၀ဝ ကြျောအတှကျ နိုငျငံတျောအနဖွေငျ့ လာရောကျ ဖွရှေငျးပေးစလေိုကွောငျး MCL တှငျအလုပျလုပျနသေော ကိုစိုးကွညျက ပွောသညျ။“စကျရုံကွီးကရပျမယျလို့တော့ ပွော ထားတာပဲ။ အတိအကတြော့မသိဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဈကိုယျတို့ကတော့ ရပျသှားတဲ့ အတိုငျးတာတဈခုဆိုရငျတော့ အလုပျ သမားသကျတမျးအနနေဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့တော့ ရခငျြတာပေါ့” ဟု ကိုစိုးကွညျက ဆကျပွောသညျ။
Mawlamyine Cement Limited- MCL (ကြိုကျမရောဘိလပျမွစေကျရုံ) သညျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁ ရကျနမှေ့စ၍ ကြောကျ မိုငျးခှဲခွငျးလုပျငနျးကို ရပျဆိုငျးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ့အတှကျ ကြောကျမိုငျးခှဲခွငျးကိစ်စအဝဝသညျ MCL (ကြိုကျမရောဘိလပျမွေ စကျ ရုံ)နှငျ့ လုံးဝမသကျဆိုငျတော့ကွောငျး စကျရုံ၏ Managing Director, Mr Hatsachai Prahanphap က ဇှနျလ ၈ ရကျ နစှေဲ့ ဖွငျ့ သကျဆိုငျရာသို့ အကွောငျးကွားခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ “အခုဇူလိုငျလလယျမှာ လကျကနျြကုနျကွမျး(ကြောကျ) တှေ ကုနျသ လောကျဖွဈသှားပါပွီ၊ ထုတျလုပျတဲ့အပိုငျးက ရပျနားပမေယျ့ ကနျြတဲ့အပိုငျးတှေ လုပျစရာနညျးနညျးပါးပါးရှိသေးတယျ သွဂုတျလ ကုနျရငျတော့ စကျရုံလုံးဝပိတျသိမျးတော့မယျ့အနအေထားပါ”ဟု အမညျဖျောပွခှငျ့မရှိသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား စကျရုံဝနျထမျးတဈဦးက ဆိုသညျ။
တဈနလြေှ့ငျ ဘိလပျမွတေနျခြိနျ ၅၀ဝဝ ထုတျလုပျသညျ့ MCL ဘိလပျမွစေကျရုံသညျ ထိုငျး SCG က အစုရှယျယာ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ မွနျမာ PLCL က အစုရှယျယာ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျး စုစုပေါငျး အမရေိကနျဒျေါလာသနျး ၄၀ဝ ဖွငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံထား သညျ့ ပုဂ်ဂလိကအကြိုးတူ ဖကျစပျလုပျငနျးဖွဈပွီး စကျရုံစတငျလညျပတျခဲ့သညျမှာ ၃ နှဈကြျောရှိပွီဖွဈသညျ။ http://burm ese.monnews.org/2020/07/08/mcl-%e1%80%98%e1%80%ad%e1%80%9c%e1%80%
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး တနျ့ယနျးမွို့နယျ အတှငျးရှိ လှယျလှမျ့ ပရဟိတကြောငျးတှငျ စာသငျကွားနသေညျ့ ကလေးငယျမြား သညျ မိုးရာသီရောကျတိုငျး အခကျအခဲမြားစှာ ရငျဆိုငျနရေကွောငျးသိရသညျ။
ထိုနရောသညျ တနျ့ယနျးမွို့နယျ လုံပုံကြေးရှာအုပျစု နောငျလုံးကြေးရှာ တှငျတညျရှိပွီး ကြောငျးသား ၁၀ဝ ကြျော ပညာ ဆညျးပူးနကွေောငျး ထိုကြောငျးတှငျ စာသငျပေးနသေညျ့ ဆရာမ နနျးမိုဆိုငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“ မိုးရှာ ရငျ သကျကယျနဲ့လုပျထားတော့ မိုးရတှေယေိုတယျ။ စာသငျခနျးထဲရလြှေံတယျ။ မွကွေီးဆိုတော့ ရှံကွားထဲမှာ စားသငျနရေ တာပေါ့”ဟု နနျးမိုဆိုငျ ကဆိုသညျ။ ထိုကြောငျးသညျ ပညာရေး သငျယူရနျ အခှငျ့အလမျးကငျးမဲ့သညျ့ တနျ့ယနျးမွို့နယျထဲ မှ ကြေး ရှာမြားမှ ကလေးငယျမြားဖွဈကွောငျး၊ ကြေးရှာထဲတှငျ မူးယဈဆေးဝါး ပေါမြားသဖွငျ့ ကလေးငယျမြား အကငျြ့မ ပကျြအောငျ လှယျလှမျ့ ပရဟိတကြောငျးကို ထူထောငျခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျဟု နနျးမိုဆိုငျ ပွောပွသညျ။“ရှာ ၁၃ ရှာက ကလေး တှပေါ။ အဲ့ကလေးတှေ နတေဲ့ရှာတှမှော စာသငျကြောငျးမရှိဘူး။ နောကျ ရှာတှမှော မူးယဈဆေးတှေ ပေါလှနျးလို့ ကလေး တှေ အကငျြ့မပကျြအောငျ ကြောငျးမှာ ချေါထားရတာပါ” ဟု နနျးမိုဆိုငျ က ထပျလောငျးပွောသညျ။
လှယျလှမျ့ ပရဟိတ ကြောငျးတှငျ သူငယျတနျးမှ သတ်တမတနျးထိ ရှိပွီး၊ အသကျ ၆ နှဈ အရှယျမှ အသကျ ၁၄ နှဈ အရှယျထိ ကြောငျးအိပျကြောငျးစားအဖွဈ လာရောကျနထေိုငျ ပညာသငျကွကွောငျး သိရသညျ။ ကလေးငယျမြားအတှကျ အဆငျပွေ သညျ့ စာသငျကြောငျးဆောငျ တဆောငျ လိုအပျကွောငျးလညျး ဆရာမ က ဖွညျ့စှကျပွောသညျ။ ထိုပရဟိတကြောငျးသညျ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ခုနဈတှငျ စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး၊ အလှူရှငျမြားဖွငျ့ ရပျတညျနရေသညျ့ ကြောငျးတကြောငျးဖွဈကွောငျးသိရ သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17396
လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား ဇူလိုငျလ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ အပွီးသပျရှေးခယျြသှားမညျဖွဈကွောငျး တှဲဖကျ အတှငျးရေးမှူး (၂) နိုငျစံတငျက ပွောသညျ။“မွို့နယျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဇူလိုငျ ၁၅ ရကျနအေ့ထိ နောကျဆုံးထားရှေးခယျြမယျ၊ ဗဟိုက နနေောကျဆုံးအတညျပွုပေး မှာကတော့ ဇူလိုငျ ၃၀ အစား ၂၀ ရကျနကေို့ ရကျရှလေို့ကျရတယျ၊ ဒါမှလညျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ ကျောမရှငျကို စာရငျးတငျလို့မှီအောငျပေါ့နျော” ဟု နိုငျစံတငျက ဆိုသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီ ဗဟိုအလုပျမှုဆောငျကျောမတီ နိုငျတလညီက “ကိုယျစားလှယျလောငျး အမညျစာရငျးအတညျပွုပွီးရငျ စညျးရုံးရေးလုပျငနျးတှေ စလုပျတော့မယျ ကိုယျစားလှယျလောငျး အရညျအခငျြး ၁၈ ခကျြရှိတယျပေါ့နျော ကိုယျစားလှယျ လောငျးတှအေနနေဲ့ အဲဒီအခကျြတှပွေညျ့စုံနမေယျဆိုရငျ ကိုယျဝငျပွိုငျမယျ့မဲဆန်ဒနယျမှာ နိုငျကိုနိုငျရမယျ”ဟု ၎င်းငျးကဆို သညျ။ ကိုယျစားလှယျလောငျး အမညျစာရငျး ထှကျရှိလာမှသာ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ နယျမွစေညျးရုံးရေးနှငျ့ ပါတီစညျးရုံး ရေးလုပျငနျးမြားကို သကျဆိုငျရာ မဲဆန်ဒနယျအသီးသီးတှငျ စတငျလုပျဆောငျသှားမညျဟု ၎င်းငျးက ဆကျပွောသညျ။ နိုငျတလညီ က “ကနြျောတို့ပါတီက မှနျလူမြိုးအရေး တဈခုတညျးကို လုပျဆောငျတာမဟုတျဘူးပေါ့နျော ပွညျနယျတဈခုလုံး ကို လှမျးခွုံပွီး ဦးဆောငျသှားမှာပါ၊ ဗမာလူမြိုးဖွဈစေ ကရငျလူမြိုးဖွဈစေ ပအိုဝျးလူမြိုးဖွဈစေ တခွားဘာသာခွားဖွဈစေ ကနြျောတို့နဲ့အတူ တဈသားထဲ လုံးဝခှဲခွားမထားပါဘူး၊ တဈခြို့လူတှေ မွငျနတောက သူတို့ မှနျလူမြိုးတဈခုအတှကျပဲလုပျ ဆောငျသှားဖို့ ပါတီဖှဲ့ထားတာလားဆိုတဲ့ စဉျးစားခကျြမြိုးတော့ရှိကွတယျပေါ့နျော၊ နာမညျကသာ တိုငျးရငျးသားပါတီပါ၊ လုပျ ဆောငျခှငျ့ရလာတဲ့ အခါကရြငျ ပွညျနယျ အကြိုး ပွညျထောငျစု အကြိုးတဈခုလုံးအတှကျပါပဲ” ဟု ဆိုသညျ။
လကျရှိတှငျ မှနျညီညှတျရေးပါတီအနဖွေငျ့ မှနျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးတို့မှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို သကျဆိုငျရာမွို့နယျပါတီ ကျောမတီ ဝငျမြားက ရှေးခယျြနဆေဲဖွဈသညျ။ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားရှေးခယျြရာတှငျ သကျဆိုငျရာမွို့နယျအလိုကျ စိတျကွိုကျ ရှေးခယျြစမှောဖွဈပွီး မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ဗဟိုမှ ဝငျရောကျစှကျဖကျလိမျ့မညျမဟုတျကွောငျး ပါတီခေါငျးဆောငျ မြားက အသိပေးပွောကွားထားသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/07/06/%e1%80%99%e1%80%bd% e1%80%94%e1%80% b
ကြောကျတျောမွို့နယျ ကစ်စပနဒီတံတားရှိ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှကေနေ ဇူလိုငျလ ၁ ရကျနကေ့နေ ၃ ရကျနအေ့ထိ သှားလာသူတှကေို စဈဆေးရာမှာ AA ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့နဲ့ ဆကျနှယျတယျဆိုပွီး မသင်ျကာမှုနဲ့ ဖမျးဆီးထားသူ ၃ ဦးကို ကြောကျတျောမွို့နယျ ရဲစခနျးကို လှဲပွောငျးပွီး အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ကြောကျတျော မွို့ခံ ကိုကြျောလှမွငျ့ကပွောပါတယျ။“ကစ်စပနဒီတံတားမှာ ၁ ရကျနေ့ မနကျ ၉ နာရီဝနျးကငျြထဲမှာ ပိန်နဲခြောငျးကြေးရှာသား ၂ ဦးနဲ့ အဲဒီဘုရားပေါငျးကြေးရှာက တဦး သူတို့ ၃ ဦးကို ဖမျးဆီးပွီးတော့ ကြောကျတျောမွို့မရဲစခနျးမှာ အကွမျးဖကျမှု ပုဒျမ ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က)နဲ့ အမှုဖှငျ့ထားပါတယျဗြ။”အမှုဖှငျ့ခံထားရသူတှကေတော့ ကြောကျတျောမွို့နယျ ဘုရားပေါငျးကြေး ရှာနေ မောငျမောငျဌေး ပိန်နဲခြောငျးကြေးရှာနေ ကိုရဲထှနျးနဲ့ ကိုနမြေိုးထှနျးတို့ ဖွဈကွပါတယျ။
မွနျမာစဈတပျက ဖမျးဆီးစဈဆေးရာမှာတော့ ဘုရားပေါငျးကြေးရှာနေ မောငျမောငျဌေးဟာ AA အဖှဲ့က တပျသား အဆငျ့ ရှိသူဖွဈပွီး ကိုရဲထှနျးနဲ့ ကိုနမြေိုးထှနျးတို့ဟာ AA သတငျးပေးတှဖွေဈကွောငျး ဖျောထုတျရမိလို့ ဇူလိုငျ ၄ ရကျမှာ ၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးကို ကြောကျတျောမွို့နယျ ရဲစခနျးသို့ လှဲပွောငျးပေးပွီး အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒနေဲ့ အရေးယူဖို့ စီစဉျထားတယျ လို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က မနကေ့ သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ အမှုဖှငျ့ခံထားရတဲ့ ပိန်နဲခြောငျး ကြေးရှာ နေ ကိုရဲထှနျးရဲ့ မိသားစုဝငျ တဦးကတော့ ကိုရဲထှနျးနဲ့ ကိုနမြေိုးထှနျးတို့ဟာ AA အဖှဲ့နဲ့ ပကျသကျမှု မရှိဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ အလားတူ ကြောကျဖွူမွို့နယျအတှငျး တပျမတျောလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှကေနေ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားတဲ့ ကပျသပွကြေေးရှာသား ၇ ဦးနဲ့ စိုငျခွုံကြေးရှာ ရာအိမျမှူးတဦးကိုလညျး အကွမျးဖကျဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး တပျမတျောဘကျက သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ ကပျသပွကြေေးရှာသား ၇ ဦးနဲ့စိုငျခွုံဒှိနျကြေးရှာမှ ရာအိမျမှူး ဦးလှမွငျ့ ကို အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျမ ၅၀(က) (ဈ) ၊ ၅၂(ည)တို့နဲ့ ဓညဝတီရတေပျစခနျးက တရားလိုလုပျ အမှုဖှငျ့ ထားကွောငျး အမညျမဖျောလိုသူ ကြောကျဖွူခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဦးက အတညျပွုပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
တပျမတျောပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးကတော့ AA နဲ့ ဆကျစပျတယျလို့ ယူဆရသူ ၁၁ ဦးရဲ့ ထှကျဆိုခကျြအရ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး မွနျမာစဈတပျနဲ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျ AA အဖှဲ့တို့အကွား စဈရေးတငျးမာမှုအတှငျး သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးခံရသူတှေ မြားပွားလာနတောပါ။ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြား အစညျးအရုံး REC ကတော့ ဖမျးဆီးခံရသူ ၅၀ဝ လောကျ ရှိနတေယျလို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလမှာပဲ သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ https://burmese.voanews. com/a/rakhine-conflict/5494333.html
ဧရာဝတီမွဈဆုံရကောတာစီမံကိနျး အပွီးတိုငျရပျဆိုငျးပေးရေး စာခြှနျတျော ထုတျပေးရနျ နပွေညျတျောတရားလှတျတျော တှငျ ဇူလိုငျ ၃ ရကျနေ့ ပွနျလညျလြှောကျထားသညျဟု ရှနေ့ေ ဦးဖိုးဖွူထံမှ သိရသညျ။ စီမံကိနျးရပျဆိုငျးပေးရေးအတှကျ Phoe Phyu associate Law Firm အဖှဲ့က တရားလမျးကွောငျးအတိုငျးလုပျဆောငျနမှေုသညျ ယခု တတိယအကွိမျဖွဈ သညျဟု သိရသညျ။
“အမှုလကျခံပေးဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ ပဏာမ လြှောကျလဲခကျြကို လြှောကျခဲ့ကွတာ ဖွဈတယျ။ ပွညျတှငျးဥပဒတှေေ နိုငျငံတကာဥပဒတှေနှေငျ့ မညီညှတျတဲ့အခွအေနတေဈရပျနှငျ့ အကောငျအထညျဖျောထားတဲ့ ဒီစီမံကိနျးကွီးကို တားမွဈစေ စာခြှနျတျော ခမြှတျပေးဖို့အတှကျ ကနဦးအနနေဲ့ ဒီအမှုကို လကျခံပေးပါ။ ဒါမှ တဈဖကျကိုလညျးဘဲ ဆငျ့ချေါနိုငျဖို့ လုပျငနျး စဉျ တှကေို ဆောငျခငျးပေးပါ လို့ ကြှနျတျောတို့ လြှောကျလဲခကျြတှေ ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။”ဟု တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဦးဖိုးဖွူ က ဇူလိုငျ ၃ ရကျနေ့ အှနျလိုငျး သတငျးစာရှငျးလငျးမှုတှငျပွောဆိုခဲ့သညျ။ မွဈဆုံရကောတာစီမံကိနျး ထာဝရ တား ဝရမျးထုတျပေးဖို့အတှကျ ရှနေ့ဦေးဖိုးဖွူက ပထမ အကွိမျအဖွဈ Asia World Company ကို ၂၀၁၉ အောကျတိုဘာလတှငျ မွဈကွီးနားခရိုငျတှငျ တရားစှဲဆိုခဲ့သျောလညျး ပယျခခြံခဲ့ရသညျဟု သိရသညျ။ ထို့နောကျ ကခငျြပွညျနယျတရားလှတျတျော တှငျ ထပျမံလြှောကျခဲ့သျောလညျး ထပျမံပယျခခြံရသညျဟု တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဦးဖိုးဖွူက ပွောပါသညျ။ မွဈဆုံ စီမံကိနျးနှငျ့ပတျသကျပွီး ယခငျစဈအစိုးရလကျထကျ တရုတျကုမ်ပဏီဖွငျ့သဘောတူ ညီခဲ့သောစာခြူပျကို ပွညျသူလူထုထံ ခပြွရနျ မိတ်တူကူးခှငျ့ကို နပွေညျတျောတရားလှတျတျောတှငျ ပွနျလညျလြှောကျထားခဲ့ သျောလညျး မအောငျမွငျကွောငျး ထပျမံပွောဆိုသညျ။
မွဈဆုံစီမံကိနျးကွောငျ့ တနျဖရဲကြေးရှာမှ အောငျမွငျသာကြေးရှာသဈတှငျရှပွေ့ောငျးခံခဲ့ရသော မွဈဆုံဒသေခံ ဒျေါလုရာက သူ၏ ခံစားခကျြကို အှနျလိုငျးသတငျးစာရှငျးလငျးမှုမှတဆငျ့ ယခုလိုပွောဆိုခဲ့သညျ။“တနျဖရဲမှာလညျး ကြှနျမတို့နလေို့မရဘူး။ အောငျမွငျသာမှာလဲ အခုထိ ပွစော မရသေးဘူး။ အဲ့တာကွောငျ့ ကြှနျမတို့ က အရငျလူတှေ ဧညျ့သညျတှဘေဲဖွဈ နတေယျ။ အဲ့တာကွောငျ့ကြှနျမတို့က ကိုယျ့ရဲ့ဌာနဒေသေ မွဈဆုံတနျဖရဲ မှာဘဲ ကြှနျမတို့ ပွနျနခေငျြတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခုခြိနျထိ ကြှနျမတို့က ဘာဆိုတာ ဘာမှမသိသေးဘူး။” ဟု ပွောသညျ။ မွဈဆုံစီမံကိနျးကို လှနျခဲ့သညျ့ စဈအစိုးရလကျထကျ၂၀ဝ၆ ခုနှဈတှငျ စတငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၁ ခုနှဈ သမ်မတ ဦးသိနျးစိနျ လကျထကျ တှငျ ယာယီရပျဆိုငျးခဲ့တာဖွဈသညျ။ အစိုးရဖှဲ့စညျးနိုငျ လြှငျ မွဈဆုံစီမံကိနျးသဘောတူစာခြုပျကို ပွညျသူထံခပြွမညျဟု ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမဲဆှယျစဉျက အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ NLD ပါတီက ပွောဆိုခဲ့သျောလညျး ယခုခြိနျထိ အကောငျ ထညျဖျောခဲ့ခွငျးမရှိသေးသညျကို တှရေ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/07/06 /%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%85%e1%80%ba%e1
အစိုးရနဲ့ နိုငျငံတကာ ကျောပိုရေးရှငျးတှအေနနေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးက သာဝသယံဇာတထုတျယူမှုဟာ ပဋိပက်ခတိုးပှား စတေဲ့အတှကျ ရပျတနျ့ဖို့ ရနျကုနျမွို့အခွစေိုကျ ရခိုငျရနေံစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့ (AOW)က ဇူလိုငျလ ၈ ရကျနမှေ့ာ ကွညော ခကျြထုတျပွီး တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ လုပျဆောငျနတေဲ့ သဘာဝသယံဇာတတူးဖျောမှုတှဟော စဈပှဲ တှကေိုပိုဖွဈပှားစပွေီး ရခိုငျပွညျသူတှကေို ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝရောကျအောငျ ထပျတှနျးပို့ပေးနသေလိုဖွဈတာကွငျေ့ ဒီစီမံကိနျး တှကေို ရပျတနျ့ပေးဖို့ ရခိုငျရနေံ စောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့ (AOW) က တောငျးဆိုလိုကျတာပါ။
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးမှာ မွနျမာ့တပျမတျောနဲ့ ရခိုငျ့တပျတျော AA တို့ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားနပေမေယျ့ ရနေံတူးဖျောမှုတှေ ဟာ ပငျလယျရနေကျထဲမှာ တူးဖျောနတေဲ့အတှကျ ထောကျပွတာလို့ ရခိုငျရနေံစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့ (AOW) ရဲ့ ညှနျကွား ရေးမှူး ဦးကြျောခိုငျက ပွောပါတယျ။ မွနျမာအစိုးရနဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေ ဌာနတေိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ သဘော ဆန်ဒ မပါ ဘဲ ဒသေတှငျးက သယံဇာတတှကေို အတငျးအဓမ်မ တူးဖျောထုတျယူနတောကွောငျ့ ရပျတနျ့ဖို့ တောငျးဆိုတာ ဖွဈတယျလို့ လညျးဆိုပါတယျ။ “ရခိုငျမှာရှိတဲ့ စီမံကိနျးတှကေို ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအရ ဗဟိုကပဲ ဆုံးဖွတျတယျ။ ဗဟိုကပဲ စီမံတယျ သုံးစှဲ တယျ။ လုပျခငျြသလိုလုပျတယျ။ ပွညျနယျတှမှော လုပျပိုငျခှငျ့တှမေရှိဘူး” ရခိုငျမှာ မွနျမာအစိုးရခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ လုပျနတေဲ့ သွစတေးလနြိုငျငံက ရနေံတူးဖျောမှုစီမံကိနျးကွီးတှမေရပျဆိုငျးဘူးဆိုရငျ ရခိုငျရနေံစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့အနနေဲ့ သွစတေးလြ အစိုးရကို တငျပွသှားမယျလို့လညျး AOW အဖှဲ့ရဲ့ ကွညောခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒီစီမံကိနျးတှေ ရပျတနျ့ဖို့ လူမှုအဖှဲ့ အစညျးတှနေဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့အတူ လူထုလှုပျရှားမှုတှလေညျး ရှိလာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ၂၀၁၄ ခုနှဈကစပွီး နိုငျငံခွားကုမ်ဗဏီ ၁၃ ခု ရငျးနှီးမွှုပျနှံခဲ့ပွီး Australia Woodside Energy နဲ့ French Tatal ရနေံကုမ်ဗဏီတှဟော ရနေံရှာဖှရေေးလုပျငနျးစဉျတှကေို အကောငျအထညျဖျောနပွေီး အသဈတှရှေိ့တဲ့ သဘာဝဓာတျငှသေို့ကျတှကေ ထှကျလာတဲ့ သဘာဝဓာတျငှတှေ့ကေို ထိုငျးနဲ့ တရုတျနိုငျငံတှဆေီ တငျပို့ဖို့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလကတညျးက လကျမှတျထိုးသဘောထူထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ကစပွီး မွနျမာ့တပျမတျောနဲ့ ရခိုငျ့ တပျတျော AA တို့ရဲ့ တိုကျပှဲတှအေတှငျး အရပျသားပွညျသူ အနညျးဆုံး တရာ့ငါးဆယျကြျော သဆေုံးခဲ့ပွီး ငါးရာကြျော ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့ကွောငျး၊ ကြေးရှာပေါငျး ၂၀ဝ ကြျောက ရခိုငျနဲ့ ခငျြးရှာသားပေါငျး ၂ သိနျးကြျော အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျခဲ့ကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရခိုငျဒသေ စဈရေးတငျးမာမှုတှကွေောငျ့ သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးခံရသူတှလေညျး ရာနဲ့ခြီရှိ နတေယျလို့ ရခိုငျရနေံစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့ AOW ရဲ့ကွညောခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ https://www.rfa.org/burme se/news/arakan-oil-watch-statement-rakhine-nautral-gas-project-07082020203321.html
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျရှိ မယျလ ကရငျ ဒုက်ခသညျစခနျးအတှငျး ဇုနျ (B5-A)ရှိ နအေိမျ တဈလုံးပျေါ သဈပငျလှဲကြ ၍ နအေိမျ တှငျ နထေိုငျသူ ၅ ဦးအနကျ အသကျ (၁၃)နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးငယျမှာ ပွငျးထနျစှာ ထိခိုကျ ဒဏျရာရရှိ၍ မဲဆောကျမွို့ ဆေးရုံကွီးသို့ အရေးပျေါ ဆေးရုံတငျလိုကျရကွောငျး စခနျးတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
ယနနေံ့နကျ ၃ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ လပွေငျးတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ အိမျနံပါတျ (၂၈၄)ရှိ စောရိနျးဂြာ နအေိမျပျေါသို့ နအေိမျဘေး နားရှိ သဈပငျကွီး လှဲကခြဲ့ခွငျးဖွဈပွီး နအေိမျအတှငျး အဖိုး၊ အဖှား၊ ဦးလေး တျောစပျသူ မိသားစု (၅)ဦးနှငျ့ အတူနထေိုငျ သညျ့ နျောသောထူးမှာ သဈပငျပိကြ၍ အပွငျးအထနျထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့သညျဟု စခနျး ရပျကှကျတာဝနျခံ နျောမအေးက ပွောသညျ။
၎င်းငျးက “ကလေးမလေးက အိမျအပျေါဘကျမှာ အိပျတာ။ သူ့အဖှားတှကေ အိမျအောကျဘကျမှာ အိပျတာ။ ထိသှားတာ ခေါငျးကိုအဓိက ထိသှားတာ။ နညျးနညျးကလေး လှုပျတာနဲ့ သှေးထှကျရော။ မကျြနှာတဈခု လုံးလညျး ဖုရောငျ နတေယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ အဆိုပါ သဈပငျလှဲကခြွငျးကွောငျ့ နအေိမျတဈခုလုံး ပွိုကပြကျြစီးသှားပွီး အဆိုပါ ပွိုကပြကျြစီး မှုအတှကျ စခနျးတှငျးတာဝနျရှိသူမြားမှ ပွနျလညျမှမျးမံဆောကျလုပျပေးရနျ စီစဉျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရ သညျ။ http://kicnew s.org/2020/07/%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9c-%e1%80%92%
ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)၊ နောငျခြိုမွို့နယျမှာ ငှကေပျြသိနျးပေါငျး ၂၄,ဝဝဝ လောကျ တနျဖိုးရှိ ဘိနျးဖွူနဲ့ စိတျကွှရူးသှပျ ဆေးပွားတှေ ဖမျးဆီးရမိတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံ မူးယဈဆေးဝါးတားဆီး ကာကှယျရေးဗဟိုအဖှဲ့က ထုတျပွနျပါတယျ။
ဇူလိုငျ ၈ ရကျနေ့ မှနျးလှဲ ၁ နာရီခှဲလောကျက မူးယဈဆေးဝါး တားဆီး နှိမျနငျးရေး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှေ ပါဝငျတဲ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့ဟာ နောငျခြို – ရပျစောကျ သှားကားလမျးမှာ ရှာဖှစေဈဆေးနတေုနျး လားရှိုးမွို့နေ စိုငျးစံမွငျ့(ခ)မာနျအောငျ မောငျးနှငျပွီး အောငျသောငျး ၂၆ နှဈ လိုကျပါလာတဲ့ မွသေယျယာဉျကို စဈဆေးရာမှာ ဖမျးဆီးမိခဲ့တာပါ။
ယာဉျပျေါမှာ သိုဝှကျသယျဆောငျလာတဲ့ ပလတျစတဈကပျခှာအိတျတှနေဲ့ ထညျ့ထားတဲ့ စိတျကွှဆေးပွား ၈၀ဝ,ဝဝဝ (ဒသေ ကာလပေါကျဈေး တနျဖိုးငှကေပျြသိနျး ၁၆၀ဝဝ)၊ ရောငျစုံ ဆပျပွာခှကျတှနေဲ့ ထညျ့ထားတဲ့ ဘိနျးဖွူ ၂၆ ဒသမ ၁၈ ကီလို (ဒသေကာလ ပေါကျဈေး တနျဖိုးငှကေပျြ ၇၈၅၄ သိနျး)၊ လကျကိုငျ ဖုနျး ၃ လုံး၊ မျောတျောယာဉျနံပါတျပွား ၂ ခုနဲ့ မွနျမာ ငှေ ကပျြ ၁၀ သိနျးတို့ကို သိမျးဆညျးရမိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးကို နောငျခြိုမွို့မရဲစခနျးမှာ မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ စိတျကို ပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒနေဲ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူပွီး ကှငျးဆကျဖျောထုတျ စဈဆေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb. no/arc hives/398631
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတောခရိုငျအတှငျးသို့ တဖကျနိုငျငံမှတဆငျ့ တရားမဝငျ ဝငျရောကျလာသညျ့ မှတျစလငျ ၂၃ ဦးကို လဝက ဥပဒဖွေငျ့ တရား စှဲဆိုခဲ့ပွီး မောငျတောမွို့နယျ တရားရုံးနှငျ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ တရားရုံးတို့က ဇူလိုငျလ ၂ ရကျ နမှေ့ စတငျကာ ထောငျဒဏျ ၆ လ စီ အသီးသီး ခမြှတျလိုကျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
မောငျတောခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ စာရငျးပေးပို့ခကျြအရ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံမှ တရားမဝငျ ဝငျရောကျလာသူမြားအနကျ ပထမအသုတျအနဖွေငျ့ မှတျစလငျ ၄၄ ဦးအား ယခုလ အစကပငျ တရားမဝငျ ခိုးဝငျမှု လဝက ဥပဒေ ပုဒျမ ၁၃ ( ၁ )၊ အား ပေးကူညီမှု ၁၃ ( ၅ ) တို့ဖွငျ့ အသီးသီး အမှုဖှငျ့ကာ တရားစှဲဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ထိုလူမြားအနကျ ထောငျဒဏျခမြှတျလိုကျသညျ့ ၂၃ ဦးမှာ ခိုးဝငျ ၁၉ ဦးနှငျ့ အားပေးကူညီသူ ၄ ဦးတို့ဖွဈကွောငျး မောငျတောခရိုငျလဝကရုံးမှ ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးထိနျလငျး က ပွောသညျ။ ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးထိနျလငျးက “ကနြျောတို့က ဖမျးထားတာတော့ မဟုတျဘူးဗြ။ ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံး က လူစာရငျးတှပေေးပွီး တရားစှဲဖို့ ညှနျကွားလာတဲ့အတှကျ ကနြျောတို့က စိစဈပွီး အရေးယူတာ။ အခုကတော့ ခိုးဝငျမှုနဲ့ ၁၉ ဦးနဲ့ အားပေးကူညီမှုနဲ့ ၄ ဦးကို တရားရုံးက ထောငျဒဏျ ၆ လ ခမြှတျလိုကျတာရှိတယျ။”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ပထမအသုတျအနဖွေငျ့ ၄၄ ဦးကို တရားစှဲရာတှငျ ၁၂ နှဈအောကျနှငျ့ ၁၈နှဈအောကျ ကလေးမြား ပါနသေညျ့အတှကျ ကလေးသူငယျဥပဒဖွေငျ့ တရားစှဲခဲ့ပွီး အာမခံပေးခွငျးမြားလညျးရှိကွောငျး၊ တခြို့အားမိဘအုပျထိနျးသူမြားလကျသို့ပွနျ လညျလှဲပေးခဲ့ကွောငျး၊ တခြို့မှာ Quarantine ဝငျနသေူမြားလညျး ပါဝငျနသေညျ့အတှကျ အသေးစိတျပွနျလညျစိစဈနေ ကွောငျး သူက ဆကျလကျရှငျးပွသညျ။ ယငျး ၄၄ ဦးထဲတှငျ ကိုဗဈပိုးတှရှေိ့သူမြားလညျး ပါဝငျနသေဖွငျ့ ဆေးကုသမှုခံယူ နရေသကဲ့သို့ ယငျးတို့အနကျ လူ ၃ ဦးမှာ လကျရှိ ဆေးစဈခကျြမြားအရ ရောဂါပိုးမတှရေ့တော့သျောလညျး Quarantine ဝငျခိုငျးထားဆဲဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ တဖကျနိုငျငံ နယျစပျမှ တရားမဝငျခိုးဝငျလာသူမြားအား တရားစှဲဆိုသညျ့ လဝက ဥပဒေ ပုဒျမ ၁၃ ( ၁ ) ၊ ၁၃ ( ၅ ) တို့မှာ ပွဈမှုထငျရှားပါက ထောငျ ဒဏျ ၆ လမှ ၇ နှဈအထိ ခမြှတျနိုငျသညျ။
လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသောငျးရှကေ “ နယျစပျကနေ ဝငျခငျြသလို ဝငျ၊ ထှကျခငျြသလို ထှကျဖွဈနတေယျ။ ကနြျောတို့ ပွောပေါငျးလညျးမြားနပွေီ။ အစိုးရက ဒီလိုပဲ လကျခံနမေယျဆိုရငျလညျး လကျခံပါ။ ပွီးရငျတော့ သူတို့ကို ရခိုငျ ပွညျနယျတခုတညျးမှာ မထားဘဲ လှတျလပျစှာ သှားခှငျ့ပွုလိုကျပါ”ဟု ပွောသညျ။ မောငျတောအရေးခငျးကွောငျး တဖကျ နိုငျငံသို့ ရောကျရှိသှားမြားသူမြားအနဖွေငျ့ နှဈနိုငျငံသဘောတူညီခကျြဖွငျ့ တဦးတယောကျမှ ပွနျလညျ ဝငျရောကျလာမှု မရှိသေးသျောလညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မိမိ ဆန်ဒအလြှောကျ တရားဝငျ သတငျးပို့ကာ ပွနျလညျဝငျရောကျလာသူ ၆၀ဝ ကြျောရှိကွောငျးလညျး မောငျတောခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ စာရငျးအရ သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/ 07/09 /225977.html